တားဆေး - အားသာချက်များနှင့်အားနည်းချက်များ Bezzia
Susana godoy | | Relaciones, ကျန်းမာခြင်း, လိင်
မင်းသိလား တားဆေးဆေး၏အားသာချက်များနှင့်အားနည်းချက်များကို? ၎င်းသည်အထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးငယ်များကြားတွင်သန္ဓေတားနည်းကိုအများဆုံးအသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည်ကိုယ်ဝန်ကိုကာကွယ်ရန်အလွန်ထိရောက်ပြီးဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအနည်းငယ်သာရှိသည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်အလွန်လုံခြုံသည်။
သို့သော်၊ အခြားမီဒီယာအားလုံးမအောင်မြင်မှသာအသုံးပြုရန်အကြံပြုသည်။ သို့သော်၊ မည်သည့်အားသာချက်များနှင့်အားနည်းချက်များရှိသနည်း။ ဒီအထူးဆောင်းပါးမှာမင်းတို့သိထားသင့်တဲ့အရာအားလုံးကိုရှင်းပြသွားမှာပါ ဆေးသောက်ပြီးနောက်နံနက်.
6.2 thromboembolic ရောဂါ
8 မွေးကင်းစကလေးဆေးပြား - အားသာချက်များနှင့်အားနည်းချက်များ
နံနက်ယံပြီးနောက်ဆေးလုံးသို့မဟုတ်ဆေးလုံးသည်ဤနည်းလမ်းကိုသန္ဓေတားနည်းဖြစ်သည် ကိုယ်ဝန်ဆောင်နိုင်ခြေကိုလျော့နည်းစေသည် နှောင့်နှေးခြင်းသို့မဟုတ်အစောပိုင်းမျိုးဥထွက်ခြင်းဖြင့်။ ၎င်းသည်သုက်ပိုး၏လှုပ်ရှားမှုကိုလည်းပြောင်းလဲစေပြီး၎င်းတို့ကို ဦး တည်ရာသို့ရောက်အောင်တားဆီးနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်ကြက်ဥတစ်လုံးသည်ဓာတ်မြေသြဇာကိုအဆုံးသတ်ပေးနိုင်မည့်ဖြစ်နိုင်ချေကိုများစွာလျော့ကျစေသည်။
နံနက်စာပြီးနောက်ဆေးပြားအများစုတွင်ပါဝင်သောအရာပါဝင်သည် ရေတံခွန်ပရိုဂျက်စတုန်နှင့်သက်ဆိုင်သောဒြပ်ပေါင်း steroid တစ်မျိုးဖြစ်သည်။ သို့သော်ပရိုဂျက်စတာရောအက်စထရိုဂျင်ပါသည့်အခြားပေါင်းစပ်ထားသည့်အရာများရှိသည်။
၎င်းကိုကိုယ်ဝန်ဖျက်ချဆေးဖြစ်သည်ဟုမကြာခဏယူဆကြသော်လည်းအမှန်တကယ်တွင်၎င်းကိုဤသို့မစဉ်းစားနိုင်ပါ သားအိမ်ထဲရှိဥ implants မတိုင်မီအလုပ်လုပ်သည်။ တကယ်တော့ အကယ်၍ implantation ဖြစ်ပြီးပြီဆိုရင်၊ မိန်းမသည်မနက်အပြီးဆေးသောက်ရင်တောင်ကိုယ်ဝန်ရှိလာလိမ့်မယ်။ ဤသန္ဓေတားနည်းသည် endometrium တွင်အပြောင်းအလဲအချို့ကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပြီးသန္ဓေသားလောင်း၏သန္ဓေသားလောင်းကိုအတားအဆီးဖြစ်စေသည်။ ဤအကြောင်းကြောင့်၎င်းသည်ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချဆေးဖြစ်သည်ဟုယူမှတ်သူများဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်ယခုအချိန်တွင်အဘို့ ဒါကိုသက်သေပြဖို့သိပ္ပံနည်းကျလေ့လာမှုမရှိဘူး။
တကယ်ထိရောက်မှုရှိဖို့ သင်အပြည့်အဝလိင်ဆက်ဆံပြီးနောက် 72 နာရီအတွင်းနံနက် - ပြီးနောက်ဆေးပြားကိုယူရမည်ဖြစ်သည်, သင်အဖြစ်မကြာမီသင်ပြီးစီးအဖြစ်ယူအများဆုံးအကြံပြုလိုတယ်ဖြစ်ခြင်း။ သို့သော်စိတ်မပူပါနဲ့၊ သုံးရက်အတွင်းသင်သောက်လျှင်၊ ဆေးလုံးသည်အလွန်ထိရောက်လိမ့်မည်။ ဟုတ်ကဲ့၊ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ၎င်းသည်လျော့ကျသွားမည်ကိုသင်သိသင့်သည်။
မည်မျှသောက်ရမည်ကိုသင့်ဆရာဝန်ကသင့်အားပြောပြလိမ့်မည်၊ သို့သော် အကယ်၍ levonorgestrel တွင် ၁.၅ မီလီဂရမ်ပါ ၀ င်ပါကဆေးတစ်မျိုးတည်းဖြစ်လေ့ရှိသည်။ အကယ်၍ ဆေးကို ၀.၇၅ မီလီဂရမ်ဆေးပြား ၂ လုံးဖြင့်တင်ပြလျှင်၊ နံနက်ယံ၌တစ် ဦး ကိုယူ။ 12 နာရီနောက်တစ်နေ့.
ကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်နိုင်သောအရာများမှာလက်တွေ့ကျကျမရှိခြင်းဖြစ်သော်လည်းနောက်ပိုင်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရလိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်းအမှန်တရားမှာအရေးပေါ်အခြေအနေတွင်သာအသုံးပြုရန်သန္ဓေတားဆေးဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းသည်ကွန်ဒုံးကျိုးပဲ့မှသာယူနိုင်သည်။ သို့မဟုတ်ကိုယ်ဝန်ကိုကာကွယ်ရန်လိုအပ်သောအစီအမံများမယူရသောအခါ.
ဤဆေး၏ထိရောက်မှုသည် ၉၅% ရှိပြီးကွန်ဒုံး၏ ၉၈% သည်သင်သိရန်အရေးကြီးသည်။ ဆေးသောက်ပြီးတဲ့နောက်မနက်ကျတော့ငါတို့ကအခိုင်အမာပြောတယ် သင်အမှန်တကယ်ရွေးချယ်စရာမရှိတော့မှသာနှင့်ဖြစ်နိုင်သည်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကြံဥာဏ်အောက်မှာ။
နံနက်ခင်းဆေးပြီးနောက်ဘာသောက်ရမယ်၊ ဘယ်သောက်ရမယ်ဆိုတာကိုငါတို့တွေ့ပြီ။ မင်းတို့အာရုံစိုက်ကြစို့ ထိရောက်မှု။ ၎င်းသည်အခြားသန္ဓေတားနည်းစနစ်များကဲ့သို့ထိရောက်မှုမရှိဟုကျွန်ုပ်တို့ပြောခဲ့ပြီးဖြစ်သည်၊ သို့သော် ... သင်သိရန်လိုအပ်သည့်အခြားအရာတစ်ခုရှိပါသလား။ ဟုတ်တယ်။
ငါတို့ပြောခဲ့သလိုပဲနေ့တွေကုန်လွန်လာတာနဲ့အမျှလျော့နည်းသွားတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကိုအကြံဥာဏ်ပေးရန် ၂၄ နာရီအတွင်းမှာလိင်ဆက်ဆံမှုက ၉၅% ထိ၊ ၄၈ နာရီမှာ ၈၅% ဖြစ်မယ်၊ ၇၂ နာရီမှာ ၅၈% ထိဖြစ်လာလိမ့်မယ်။။ ၎င်းကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပါက၎င်းကိုပထမဆုံးနေ့၌သောက်သုံးရန်အလွန်အကြံပေးလိုသည်။ မဟုတ်လျှင်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရန်အခွင့်အလမ်းများမြင့်မားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
စကားမစပ်, သင်ကမကူညီလိမ့်မယ်အဖြစ်, သင်မတိုင်မီမဟုတ်, လိင်ဆက်ဆံမှုပြီးနောက်ယူ။ ရှိသည်။ အဲဒီလိုလုပ်ခြင်းကသင့်ကိုစိတ်ထိခိုက်စေပြီးအန်ချင်လာလျှင် မင်းနောက်တစ်ခုရှိသင့်တယ်အနိမ့်ဆုံး ၃ နာရီပြီးသွားပါပြီ။
ထို့အပြင်ကွန်ဒုံးကိုအသုံးပြုသင့်သည်။ သို့မှသာမျိုးဥတစ်လုံးပြီးဆုံးသွားသောကြက်ဥအန္တရာယ်အလွန်နည်းပါးပြီးနီးပါးမျှမရှိတော့ပါ။ အကယ်၍ သင်သန္ဓေတားဆေးကိုသောက်လျှင်၊ သန္ဓေတားဆေးကိုသောက်ပြီးနောက်တစ်နေ့တွင်သင်အသစ်ထုပ်ပိုးရန်စတင်ရမည်။ သင်လိုချင်သည့်အရာကိုစတင်ယူပါကသင်သည်ရာသီလာခြင်း၏ပထမနေ့ကိုစောင့်ရမည်။ အကယ်၍ သင်အသုံးပြုသည်သို့မဟုတ်သင်လိင်အင်္ဂါကွင်းသို့မဟုတ်သန္ဓေတားနည်းကိုအသုံးပြုမည်ဆိုပါကသင်ဤညွှန်ကြားချက်များကိုလိုက်နာရမည်။ ဒါပေမယ့်ကိစ္စရပ်အားလုံးမှာ၊ ကွန်ဒုံးအသုံးပြုခြင်းကိုအလွန်အမင်းထောက်ခံသည်။
သင့်ကာလသည် ၃-၄ ရက်နောက်ကျလျှင်သို့မဟုတ်ပုံမှန်မဟုတ်သည့်အသွင်အပြင်ကိုပြလျှင်၊ ကိုယ်ဝန်ကိုစစ်ဆေးခြင်းသည် ပို၍ ကောင်းသည်။ ထို့ကြောင့်သင်သံသယထားခဲ့ပါ။
သငျသညျကိုလည်းသတိရသင့်တယ် စန်း Juan ၏မြက်, စိန့်ဂျွန်၏ wort ၏အမည်အားဖြင့်လူသိများ, ထိရောက်မှုကိုလျှော့ချလိမ့်မည်.
ဒီမူးယစ်ဆေးဝါးများသောအားဖြင့်ဆိုးကျိုးများရှိသည်ပါဘူးပေမယ့်။ စင်စစ်တွင်စပိန်၌၎င်းကို ၂၀၀၁ ခုနှစ်တွင်စတင်ရောင်းချခဲ့ပြီး ၂၀၁၃ ခုနှစ်အထိသတင်းပို့နိုင်ခဲ့သည် အမှုပေါင်း ၂၀ ectopic ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းနှင့် thromboembolic ရောဂါဖြစ်ပွားမှုကဲ့သို့သောပြင်းထန်သောဆိုးရွားသောတုံ့ပြန်မှုများ။
Ectopic ကိုယ် ၀ န်ဟုလည်းသိကြသော၊ သားအိမ်ပြင်ပရှိသန္ဓေသားလောင်းကိုဖယ်ထုတ်သောအခါမျိုးတွင်ဖြစ်သည်, fallopian ပြွန်များတွင်အများဆုံး (98% အထိ) ။ ပထမသုံးလအတွင်းကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်းသည်ပုံမှန်ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိသောဤကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်း၏အမျိုးအစားသည်အလွန်နည်းပါးသည်။ ဒါပေမယ့် အကယ်၍ သင်ကရှေ့ကိုတက်နိုင်မယ်၊ အချိန်မီမတွေ့နိုင်ဘူးဆိုရင်၊ အမျိုးသမီးများ၏ကျန်းမာရေးအတွက်အလွန်အန္တရာယ်ရှိနိုင်သည်.
အဆုတ်ကိုရောက်နိုင်သောသွေးပြန်ကြောအတွင်းရှိသွေးခဲခြင်းဖြစ်ပေါ်မှုသည် thromboembolic ရောဂါဖြစ်ပွားစေသည်။ ဟော်မုန်းတိုက်ဖျက်ရေးကိုသုံးသောအမျိုးသမီးများသည်ဤရောဂါကိုဖွံ့ဖြိုးရန် ၃ ဆပိုမိုမြင့်မားနိုင်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, သင် levenorgestrel ပါ ၀ င်သည့်တက်ကြွစွာပါဝင်သည့်နံနက်တိုင်းဆေးသောက်ပါက၎င်းကိုခံစားနိုင်သည့်အန္တရာယ်မှာအလွန်နည်းပါးသည်။ ၁၀၀,၀၀၀ ထဲကအမျိုးသမီး ၂၀ သာဒီရောဂါခံစားရလိမ့်မယ်.
ကျနော်တို့မူးယစ်ဆေးဝါးများအကြောင်းပြောဆိုသည့်အခါငါတို့သည်လည်း contraindications အကြောင်းပြောဆိုရန်ရှိသည်။ ဆေးသောက်ပြီးနောက်နံနက်သူတို့ကိုနှင့် ပေါ်ပေါက်လာသောပြproblemsနာများကိုရှောင်ကြဉ်ရန်၎င်းတို့ကိုစိတ်ထဲထားရမည်။ ၎င်းတို့သည်အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် -
lactose သို့မဟုတ် galactose သည်းမခံဖြစ်ခြင်း
Crohn ရောဂါ, colitis သို့မဟုတ်အူကိုထိခိုက်သောအခြားမည်သည့်ရှိခြင်း
အတင်းအကျပ်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ် fallopian ပြွန်ရောင်ခြင်းများ၏သမိုင်း
၎င်းကိုလိင်ဆက်ဆံပြီးနောက် ၇၂ နာရီအတွင်းတွင်အသုံးပြုသင့်သည်၊ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ၎င်း၏ထိရောက်မှုလျော့နည်းသွားသည်။
အဆုံး၌သင်ကိုယ်ဝန်ရပြီး၊ လိုချင်သောကိုယ်ဝန်ဖြစ်ပါက၊ ဆေးလုံးသည်သန္ဓေသားကိုမထိခိုက်ပါ။ ဒါ့အပြင်ဒါကသင့်ရဲ့နို့တိုက်ကျွေးမှုကိုလျော့နည်းသွားစေမှာမဟုတ်ဘူး၊ ဒါကြောင့်၎င်းကိုသင်စဉ်းစားသောအခါသင်ပြန်သောက်နိုင်သည်။ ဟုတ်တယ်၊ ပိုးသတ်ဆေး လိင်မှတဆင့်ကူးစက်သောရောဂါများမှသင့်အားအကာအကွယ်မပေးပါထို့ကြောင့်ကွန်ဒုံးအသုံးပြုခြင်းကိုအမြဲတမ်းထောက်ခံသည်။
ဒီဆေးမှာရှိတယ် ယူရို 20 ဝန်းကျင်စျေးနှုန်း။ သင်ဆေးဆိုင်တွင်သင် ၀ ယ်နိုင်သည်။ သင်၏ဆေးကုသမှုဌာနသို့သွားသင့်သည်၊ သို့သော်ယင်းသည်၎င်းတို့ဆေးညွှန်းနိုင်သောနေရာတွင်ရောက်သောကြောင့်ထိုပမာဏကြောင့်ပမာဏကိုသိသိသာသာလျှော့ချလိမ့်မည်။ သင့်ဆရာဝန်အားအကြံဥာဏ်တောင်းရန်ဘယ်တော့မျှမနာပါ။
၎င်း၏အမည်ကိုဖော်ပြသည်အတိုင်း ဆေးသောက်ပြီးနောက်နံနက်ကိုအကာအကွယ်မဲ့လိင်ဆက်ဆံပြီးနောက်သောက်သင့်သည် သို့မဟုတ်သောအခါထိုကဲ့သို့သောကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအလုပ်မလုပ်ပါဘူး။ မြန်လေလေ၊ ပိုကောင်းလေလေဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်နေဆဲ, သင်ဖြစ်စေလွှမ်းမိုးခံရဖို့မလိုအပ်။ ကျနော်တို့ဆက်ဆံရေးပြီးနောက် 72 နာရီအထိရှိသည်ကတည်းက။ ကျနော်တို့ကိန်းဂဏန်းတွေကိုအားကိုးမယ်ဆိုရင်ရှင်းပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်လိင်ဆက်ဆံပြီးနောက် ၂၄ နာရီအတွင်းသောက်လျှင်၎င်းသည် ၉၅% ထက်ပိုပြီးထိရောက်လိမ့်မည်။ ၄၈ နာရီမှာ ၈၅% အထိကျသွားတယ်။ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်အလွန်အရေးကြီးသောအရာတစ်ခုခု, အထူးသဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့နေထိုင်သောအခါ Ovulation မတိုင်မီရက်ပေါင်း.
ဒီဆေးကတစ်ခါတစ်ရံဆေးနှစ်လုံးပါတဲ့ဘူးတစ်လုံးထဲရောက်သွားနိုင်တယ်။ မင်းသူတို့ကို ၁၂ နာရီခြားပြီးယူမယ်။ မင်းသာ သူတို့တစ် ဦး တည်းဆေးထိုးရောင်းဆေးတစ်လုံးတည်းသောက်ရင်ပိုလွယ်သွားမယ်။ ၎င်းသည်တစ်ကြိမ်တည်းသောက်သုံးခြင်းဖြစ်ပြီး၎င်းကိုကြိုတင်ကာကွယ်ရန်ဖြစ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးယူခြင်းကအမြဲကောင်းကြောင်းသတိရပါ။
သံသယဖြစ်တဲ့အခါ, ကိုဖွင့်ဖို့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ် နံနက်ခင်းဆေးလုံးလက်ကမ်းစာစောင်။ ဤနည်းဖြင့်သာလျှင် ပို၍ သာယာမှုအတွက်သင်လိုအပ်သည့်အရာအားလုံးကိုရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်လိမ့်မည်၊ ဆေးကိုသင်သောက်သုံးခဲ့လျှင်သို့မဟုတ်သင်ပြုလုပ်ရန်နီးကပ်လာပြီဖြစ်သည်။
ဆေးသောက်ပြီးနောက်သို့မဟုတ်မနက်ခင်းတွင်၎င်းကိုခေါ်သောလူများရှိသည် အရေးပေါ် contraceptive ဆေးလုံး။ သို့သော်၎င်း၏အမည်ကအကြံပြုထားသည့်အတိုင်း၎င်းကိုအရေးပေါ်အခြေအနေတွင်သာအသုံးပြုသည်။ နေသမျှကာလပတ်လုံးလိင်ဆက်ဆံပြီးနောက်ကိုယ်ဝန်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါတယ်။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်မလိုလားအပ်သောကိုယ်ဝန်ကိုကာကွယ်ရန်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုသန္ဓေတားဆေးအနေဖြင့်မသောက်သင့်ပါ။ ၎င်းကိုပုံမှန်နှင့်အရေးပေါ်ဆေးလုံးကိုသာအသုံးပြုသောကြောင့်၊ Levonorgestrel ကဲ့သို့သောအစိတ်အပိုင်းများကြောင့်၎င်းသည်မျိုးဥထွက်ခြင်းကိုကာကွယ်ပေးသည်။
အကောင်းဆုံးအရာမဟုတ်ပါ။ ထပ်မံ၍ ထပ်မံပြောကြားသည်မှာ၊ ဆေးသောက်ရန်လိုအပ်သောထိရောက်မှုရှိစေရန်အတွက်အချိန်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့အားအကာအကွယ်မဲ့ဆက်ဆံရေးရှိပါကဆေးကိုအမြန်ဆုံးသောက်ပါလိမ့်မည်။ ထိုနောက်မှနာရီပေါင်းများစွာသို့မဟုတ်ရက်အနည်းငယ်အကြာတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အကာအကွယ်မဲ့ဆက်ဆံရေးပြန်လည်ရရှိပါက၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းမှကာကွယ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ဒါကြောင့်ပြyouနာမရှိအောင်သင်လိင်ဆက်ဆံသော်လည်းကွန်ဒုံးကိုသုံးနိုင်သည်။
ထောက်ခံချက်တစ်ခုအနေဖြင့်ဆေးခန်းသို့မဟုတ်အနီးဆုံးဆေးဆိုင်သို့သွားခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကမင်းကိုအမြဲတမ်းပိုကောင်းအောင်အကြံပေးနိုင်ပြီးမင်းဘယ်လောက်ယူရမယ်ဆိုတာမင်းကိုပြောလိမ့်မယ်။ ဤကိစ္စတွင်ဆေးဝါးများနှင့်ဟော်မုန်းများထက်ခေါင်းစဉ်နှင့်တကွ၊ ၎င်းနှင့်မကစားခြင်းသည်အမြဲတမ်းပိုကောင်းသည်။ သင်စဉ်းစားရန်လိုသည် တစ်နာရီအကြာဆေးလုံးသည်ပုံမှန်ဆေးလေးလုံးနှင့်ညီသည်။ ဆေးလုံးအပြီးမနက်ခင်းတွင်ပုံမှန်မဟုတ်သည့်ဆေးများသောက်သုံးခြင်းမှာပြင်းထန်သောရောဂါများဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ဟုတ်တာပေါ့၊ မင်းမှာသူတို့မှာမှန်ကန်တဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းများနဲ့ဂရမ်တွေပါအောင်သေချာအောင်လုပ်ရမယ်။ ကျနော်တို့အမြဲတမ်းသေချာသိရန်သွားကြသည်မဟုတ်သောအရာတစ်ခုခု။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အရေးပေါ်ဆေးပြားကိုဆက်လက်ရွေးချယ်ပြီး ပို၍ သာယာနေပါမည်။
အကယ်၍ သင်သည်ပါးစပ်ဖြင့်သန္ဓေတားဆေးကိုသောက်နေလျှင်ပင်၊ သင်ဆေးထိုးပြီးသွားလျှင်၊ ဆေးသောက်ပြီးနောက်မနက်တွင်သင်သောက်နိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်နေ့စဉ်ဆေးကိုသောက်လျှင်၊ မည်သည့်ဆေးကိုမဆိုမသောက်ဘဲမယူလျှင်၊ သို့သော်အထက်သို့ပြန်သွားပါကသင်ရိုက်ချက်များကိုမေ့သွားလျှင်ဆေးသောက်ပြီးနောက်နံနက်ခင်းကိုရွေးခြင်းသည်ပိုကောင်းသည်။ သင်၏ရာသီလာသည့်အချိန်အထိသင်၏ဆက်ဆံရေးတွင်ကွန်ဒုံးကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်သင်၏မီးယပ်အထူးကုဆရာဝန်နှင့်ချိန်းဆိုခြင်းပြုလုပ်လျှင်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင်သန္ဓေတားအသစ်ကိုထပ်မံစတင်သုံးစွဲရန်စောင့်ဆိုင်းသင့်သည်။ သူကသာအတည်ပြုလိမ့်မယ် က) ဟုတ်တယ်၊ အချိန်ကုန်လွန်လာသည်နှင့်အမျှဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောကိုယ်ဝန်ကိုကျွန်ုပ်တို့မေ့သွားလိမ့်မည် ကျနော်တို့ပုံမှန်အတိုင်းစတင်ပါလိမ့်မယ်။
ဟုတ်တယ်၊ ဖြစ်နိုင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်မထောက်ခံဘူး။ ပထမ ဦး ဆုံးအဘို့အ ဟော်မုန်းများများ အဲဒါဟာသူ့ရဲ့ထိရောက်မှုကိုဆုံးရှုံးနိုင်တဲ့အတွက်၊ ငါတို့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဒုတိယပြစ်ဒဏ်ပေးလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့မကြာခဏသူတို့ကိုယူလျှင်ခန္ဓာကိုယ်ကရန်အသုံးပြုရလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ခန္ဓာကိုယ်သည်ပညာရှိပြီးနံနက်တိုင်းဆေးသောက်ရန်လုံးဝအချိန်ယူရလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်ရာသီလာခြင်းသံသရာတွင်အချို့သောအပြောင်းအလဲများခံစားရနိုင်သည်မှာအံ့သြစရာမဟုတ်ပါ။ ထိတ်လန့်စရာမလိုဘဲထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သောအရာတစ်ခုခု။
ဆေးသောက်ပြီးနောက်နံနက်တိုင်းတွင် Levonorgestrel ၀.၇၅ မီလီဂရမ်ပါ ၀ င်သည်။ ၎င်းသည်သန္ဓေတားဆေးအတားအဆီးတစ်ခုအဖြစ်လုပ်ဆောင်သောဤဒြပ်ပေါင်းဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ဘဲဥထွက်တားစီး ဒါကြောင့်အကာအကွယ်မဲ့လိင်ဆက်ဆံမှုကြောင့်သားဥကိုဓာတ်မြေသြဇာမဖြစ်အောင်ကာကွယ်ပေးတယ်။ ထို့ကြောင့်၎င်းကိုအမြန်ဆုံးယူရန်အလွန်လိုအပ်သည်။
ဆေးလုံးကိုသောက်ပြီးတာနဲ့ငါတို့သံသရာပျက်သွားတယ်။ မျိုးဥထွက်ခြင်းမရှိသောကြောင့်ရာသီလာခြင်းကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်နှောင့်နှေးမှုများသည်များသောအားဖြင့်ဖြစ်လေ့ဖြစ်သော်လည်းဖြစ်ရပ်အားလုံးတွင်တော့မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သိသည့်အတိုင်းကိုယ်ခန္ဓာအားလုံးသည်အတူတူမပြုမူကြပါ။ ထို့ကြောင့်အချိန်ကာလသည်သင့်အားမှန်ကန်သောနေ့၊ သို့မဟုတ်မတိုင်မီနှင့်ပြီးနောက်တွင်ဖြစ်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ဟာဟော်မုန်းတွေများများစားစားယူနေတယ်ဆိုတာသတိရပါ။
အကယ်၍ သူ့ဟာသူသာမန်သံသရာအတွင်းကျွန်ုပ်တို့ပြောင်းလဲမှုများကိုတွေ့ကြုံရလျှင်၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့ပြောင်းလဲသောအခါ၎င်းသည် ပို၍ သိသာထင်ရှားလိမ့်မည်။ အချိန်ကာလသတ်မှတ်ပြီးနှစ်ပတ်အကြာတွင်မပေါ်လာပါကသင်ကိုယ်ဝန်ကိုစစ်ဆေးသင့်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Bezzia » စိတ်ပညာနှင့်စုံတွဲ » Relaciones » မွေးကင်းစကလေးဆေးပြား - အားသာချက်များနှင့်အားနည်းချက်များ
147 မှတ်ချက်များ, သင့်စွန့်ခွာ
pzz နောက်တစ်နေ့တွင်ဆေးလုံးကိုကျွန်ုပ်အသုံးပြုခဲ့သည်။ ၎င်းသည်အလွန်ထိရောက်ကြောင်းသင့်အားပြောနိုင်သည်။ သို့သော်ဆောင်းပါးသည်အထူး“ ကိစ္စရပ်များ” တွင်သာဖော်ပြထားသောကြောင့်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ခန္ဓာကိုပြောင်းလဲစေပြီးအခြားနည်းဖြင့်ပြုမူနိုင်သည်။
မင်္ဂလာပါ။ ကျွန်ုပ်သည်တစ်နေ့လျှင်သန္ဓေတားဆေးကိုမသောက်ပါက၊ ၁၂ နာရီအကြာတွင်ယင်းကိုသောက်ပါကအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါသလား။ ထိုနေ့၌ငါရည်းစားနှင့်ဆက်ဆံရေးရှိခဲ့ကြောင်းမေ့လျော့ ဒါ့အပြင်ငါနေမကောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအထုပ်တစ်ခုလုံးကိုမပြီးအောင်မပြီးနိုင်ခဲ့ဘူး၊ အဲ့ဒီနေ့မှာပဲငါရည်းစားနဲ့အတူနေပြီးနောက် ၄ ရက်အကြာမှာပဲ။
ကားလို့စ်အငယ်တန်း (@ junior000019) ဟုသူကပြောသည်
Carlos Junior သို့ပြန်သွားသည် (@ junior000019)
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်မေးခွန်းတစ်ခုမေးလိုပါသည်။ ဆေးနှစ်ကြိမ်သောက်ပြီးနောက်နောက်တစ်နေ့ဆေးသောက်ပါက၊ ဒီဟာငါ့ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်ဘယ်လိုသက်ရောက်မှုတွေရှိနိုင်သလဲ။
မင်္ဂလာပါ၊ အိုလာ၊ မင်းမေးခွန်းတစ်ခုအတွက်အဖြေရလားသိချင်လား။
ငါနဲ့တူနေတယ်ဆိုတာမင်းသိတယ်။ ငါမင်းကိုသူတို့ဘာပြန်ပြောခဲ့သလဲဆိုတာငါသိချင်တယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
နောက်တစ်နေ့မှာဒီဆေးကိုငါသောက်လိုက်တယ်။ ငါမိန်းမအင်္ဂါဇာတ်အရည်နဲ့ ၈ ရက်နီးပါးသွေးထွက်နေတယ်။
မင်္ဂလာပါ၊ ဤလ ၁၃ ရက်နေ့မနက် ၂ နာရီတွင်ကျွန်ုပ်၏ရည်းစားနှင့်ဆက်ဆံရေးရှိခဲ့ပြီးမနက်ဖြန် ၁၆ ရက်တွင်ကျွန်ုပ်ဆေးလုံးကိုသောက်တော့မည်။ ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်ကိုအရေးတကြီးပြန်ပြောပါ
မင်းကိုယ်ဝန်ရခဲ့တာလား ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုငါနဲ့အတူတူပါပဲ။ v
ဇူလိုင်လ ၃၀ ရက်နေ့တွင်ကျွန်ုပ်သည်ကာလပြီးဆုံးခဲ့ပြီးသြဂုတ်လ ၅ ရက်နေ့တွင်ကျွန်ုပ်ဆက်ဆံရေးရှိခဲ့ပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည် Preserbatibo နှင့်ဆက်ဆံရေးရှိခဲ့ပြီးနောက်တစ်နေ့တွင်ဆေးလုံးကိုသောက်သုံးခဲ့ပြီးသြဂုတ်လ ၂၁ ရက်မှ ၂၄ ရက်အထိကျွန်ုပ်သည်ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းသို့ရောက်ခဲ့ပါသည်။ စက်တင်ဘာအားလုံးသည်ကျွန်ုပ်ကိုမစွန့်ပစ်ဘဲကျွန်ုပ်မသွားပါ။ နောက်ကျောကဖြစ်သင့်သောအရာကိုမှဆက်ဆံရေးရှိသည်။ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
အလေးအနက်ထားလား 🙁ငါ ၃၃ နာရီယူခဲ့တယ်
နောက်တစ်နေ့ဆေးသောက်လိုက်တာကပိုတိုတယ် .. ငါခေါင်းကိုက်တယ်၊ ဗိုက်နာတယ်၊ ဗိုက်နာတယ် .. နံနက် ၆ နာရီမှာရာသီလာတာပုံမှန်လား။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်သြဂုတ်လ ၂၀ ရက်နှင့်စက်တင်ဘာ ၁ ရက်နေ့တွင်ကျွန်ုပ်၏ရည်းစားနှင့်အကာအကွယ်မဲ့နေခဲ့ပါသည်၊ ကျွန်ုပ်သည်ရက် ၃၀ သံသရာတွင်ရှိနေပါပြီ၊ နံနက် ၂ ရက်တွင်ဆေးလုံးကိုသောက်သုံးခဲ့ပြီး ၁၄ ရက်အတွင် ၁၄ ရက်အကြာတွင်မူ၊ အခုငါအဲဒီကိုရောက်ခဲ့ရတယ်၊ ၁၀ ရက်နေ့မှာငါစူးပြီးငါ့အချိန်ကာလရောက်လာပြီထင်ပေမယ့်အစွန်းအထင်းပဲ၊ ငါသွေးထွက်တာမျိုးမရှိခဲ့ဘူး၊ ကိုယ်ဝန်ရှိနေရင်ငါအာရုံကြောတွေတွေးနေတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်အောက်တိုဘာ ၁၁ ရက်တွင်လိင်ဆက်ဆံခဲ့ပြီးနောက်တစ်နေ့တွင်ဆေးသောက်ပြီးနောက် ၁၃ နာရီအကြာတွင်ဒုတိယဆေးကိုသောက်ခဲ့သည်။ သူမကိုယ်ဝန်ရှိနေနိုင်ခြေရှိပါသလား။ ကျွန်တော်အောက်တိုဘာ ၁၉ ရက်မှာလာသင့်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်အချိန်ကုန်မလာပါဘူး။ အဖြေတစ်ခုလိုပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
မင်္ဂလာပါ၊ နောက်ရက်များ၌ဖြစ်ပျက်သည့်သတ်မှတ်ထားသောအချိန် (၇၂ နာရီ) တွင်နောက်တစ်နေ့ဆေးသောက်ပါကကျွန်ုပ်၌မေးခွန်းရှိသည်။ ကျွန်ုပ်သည်အကာအကွယ်မဲ့လိင်ဆက်ဆံလျှင်ကိုယ်ဝန်ရနိုင်ခြေရှိသလား။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်၏ရည်းစားနှင့်ဆက်ဆံရေးရှိခဲ့ပြီး၊ ကျွန်ုပ်သည်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းပြီးအောင်ပြီးပါပြီ။ ကျွန်ုပ်တို့၌ဆက်ဆံရေးရှိခဲ့ပါသည်။ အရေးပေါ်ဆေးလုံးကိုသောက်ပါသည်။ နှစ်ရက်အကြာတွင်ထပ်မံရှုပ်ထွေးပြီး၊ ကျွန်ုပ်သည်ဤသို့ပြုခဲ့သည်မှာနှစ်ဆယ်ရှိပြီ ဖြစ်၍ ကျွန်ုပ်အလွန်ကြောက်ပါသည်။ ကျေးဇူးပြု၍ ဖြေပါ ငါ့ကို
မင်္ဂလာပါ၊ မေးခွန်း၊ ကျွန်ုပ်ဆေးသောက်လျှင်ဘာဖြစ်မည်လဲ၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်သွေးလည်ပတ်စေသည့်သွေးထွက်သံယိုမဟုတ်ပါ၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်ခေါင်းတွင်နာနေပါက။ ငါကိုယ်ဝန်ရပြီလို့ဆိုလိုတာလား ငါတတ်နိုင်သလောက်မြန်မြန်ဖြေဆိုရန်မင်းကိုလိုအပ်တယ်၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ကျွန်ုပ်၏မေးခွန်းမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် - ကျွန်ုပ်ကိုဂရုမစိုက်သောကြောင့်ဆေးများကိုသောက်ပါ။ ဒါပေမယ့်တစ်ပါတ်အကြာမှာကွန်ဒုံးကျိုးသွားတယ်၊ ဒါနဲ့ငါထပ်ထပ်ယူလိုက်တယ်၊ ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ခန္ဓာတွင်အဘယ်အန္တရာယ်ရှိသောဆိုးကျိုးများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သနည်း။ တစ်ခုနှင့်တစ်ခုအကြားအချိန်သည်အလွန်တိုတောင်းသောကြောင့်။
ကျွန်ုပ်မေးခွန်းမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် - ကျွန်ုပ်သည်အကာအကွယ်မရှိသောလိင်ဆက်ဆံခြင်းနှင့်ဆေးလုံးကိုသောက်ခြင်းဖြစ်သည်။ တစ်ပတ်အတွင်းအဆက်ဖြတ်လိုက်ပြီးကွန်ဒုံးကျိုးသွားပြီးကျွန်ုပ်ထပ်မံသောက်လိုက်သည်။ ၎င်းသည်အတူတူပင်လည်ပတ်မည်လားသို့မဟုတ်ဆေးလုံး၏ထိရောက်မှုကိုဆုံးရှုံးမည်လား။ ကိုယ်ခန္ဓာလား ဘာလို့လဲဆိုတော့တစ်ယောက်နဲ့တစ်ခုယူတာကသိပ်တိုတယ်
Hazell လက်ဇန္ဒြာ Sequeira Jimenez ဟုသူကပြောသည်
Hazell Alexandra Sequeira Jimenez အားပြန်ကြားပါ
ကောင်းပြီ၊ ငါအတွက်အရမ်းကောင်းပုံရတယ်၊ ဒါပေမယ့်သူမနဲ့ပါတ်သတ်ပြီးနောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များကိုငါဖော်ပြချင်ပါတယ်
ဗင်နီဇွဲလား .. ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ ... ဆက်နွယ်မှုကိုကျွန်ုပ်မြင်သည်။ နောက်တစ်နေ့တွင်ဆေးလုံးကိုငါယူသည်။
သူနှင့်တစ်ပတ်အတွင်းငါနှင့်သူနှင့်ဆက်ဆံရေးရှိခဲ့သည်။ ဘာတွေထူးလဲ??? ကျေးဇူးပြု၍ ဖြေပါ
vanesa သို့ပြန်သွားပါ ..
မင်္ဂလာပါ။ ကျွန်ုပ်၏မေးခွန်းမှာအောက်တိုဘာ ၁၃ ရက်နှင့် ၁၆ ရက်တို့တွင်အပြန်အလှန်ဆက်ဆံရေးရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းမှာ ၁၃ ကြိမ်မြောက်တွင်ပိုမိုအကာအကွယ်ရရှိရန်နောက်ဆုံးသောနေ့ဖြစ်သောကြောင့်ငါဆေးသောက်ပြီး၊ ၁၆ ကြိမ်မြောက်တွင်အေးဆေးတည်ငြိမ်စွာနဲ့လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုပိုမိုကာကွယ်ရန်လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုပြုလုပ်ခဲ့ပေမယ့်ဆေးယဉ်ပါးတဲ့အတွက်တစ်ခုခုဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ငါမသိရပါဘူး၊ ငါဟာထပ်တလဲလဲမစားနိုင်သလိုအဲဒီလိုမျိုးရေကန်တွေလဲမလုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ ငါ 13 ရက်နေ့တွင်ပြန်ခဲ့ရသည်နှင့်ဒါဟာ 16 ရက်နေ့တွင်ငါ့ထံသို့လာ။ ကတည်းကငါ psa သိလို။ ဇန်နဝါရီလ
မင်္ဂလာပါ။ ကျွန်ုပ်ဆေးသောက်ပြီးဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်၏အချိန်ကာလရောက်လာသောအခါငါအရင်ကသောက်ခဲ့သောသန္ဓေတားဆေးကိုသောက်နိုင်မလားမသိလိုပါ။
ကျွန်တော့်ပြproblemနာကလွန်ခဲ့တဲ့ ၂ လကဆရာ ၀ န်ကသန္ဓေတားဆေးကိုမသောက်ဖို့နဲ့ကွန်ဒုံးနဲ့လအနည်းငယ်နေဖို့ဂရုစိုက်ဖို့ပြောတယ်။ မနေ့ကငါရည်းစားနဲ့လိင်ဆက်ဆံပြီးသူကွန်ဒုံးကိုဖောက်ခွဲလိုက်တယ်။ ဒီနေ့ငါဆရာဝန်ဆီသွားပြီးသူက xke ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချပြီးနောက်နေ့ကဆေးလုံးကိုမကြောက်ဘူးလို့ပြောတယ်။ ငါကသောက်နေတုန်းပဲ။ ။ ဆရာဝန်ကကျွန်ုပ်၏အချိန်ကုန်လာသည်နှင့်အမျှငါသန္ဓေတားဆေးကိုစတင်သုံးစွဲသော်လည်း၊ ဆေးပြားကိုကျွန်ုပ်သောက်နိုင်၊ မသိနိုင်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
သန္ဓေတည်ချိန် (သုက်ပိုးနှင့်ဥနှင့်သုက်ပိုးပေါင်းစည်းခြင်း) ၏ဘဝတွင်ကျွန်ုပ်သည်ဘဝမရှိပါ။ သင်စမ်းကြည့်လို့ရသလား။
အကယ်၍ သင်အမှန်တကယ်ပါ ၀ င်ပါကထိုဘဝသစ်ကိုသတ်ရန်သင်အန္တရာယ်ရှိသလား။
ကျွန်ုပ်သည်ဆရာ ၀ န်မဟုတ်သကဲ့သို့ဇီဝဗေဒကိုလည်းကျွန်ုပ်မသိပါ။ ရာထူးနှစ်ခုလုံးကိုဖတ်ခဲ့သည် (မအောင်မြင်ပါ၊ မဖျက်သိမ်းပါက)
ရပ်တန့်ခြင်းစွန့်စားမှုကိုရှောင်ရှားပါ။ ၎င်းသည်ယုတ္တိမရှိ၊ မကျန်းမာ၊ မမှန်ကန်သောပုံမပေါက်ပါ
ကောင်းပြီ၊ ဒါကရိုးရှင်းတဲ့မေးခွန်းပါ။ အကယ်၍ သားဥကမျိုးအောင်မပျိုးပြီးစိုက်ပျိုးလို့မရဘူးဆိုရင်၊ အသက်မရှင်နိုင်ဘူး။ Ovum သည်ဆဲလ်များကိုသာများပြားစေပြီးအခြားမည်သည့်အရာကိုမဆိုပွားများစေရုံသာမကသူ့အားအာဟာရနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်သားအိမ်ထဲ၌၎င်း၏ implantation လိုအပ်သည်။ နားလည်နိုင်ဖို့အတွက်ကြက်ဥကိုကြက်မကစားပြီးသင့်စားပွဲပေါ်တင်လိုက်ရင်အဲဒီမှာကြက်တစ်ကောင်မွေးဖွားလာတယ်လို့မင်းထင်သလား။ သင့်တွင်မွေးဖွားရန်လိုအပ်သောအရာများရှိသည်၊ သို့သော်သူသည်အမေလိုအပ်သောကြောင့်မွေးဖွားမည်မဟုတ်ပါ။ ဤအရာသည်အတူတူပင်ဖြစ်သည်။
သန္ဓေသားဖွံ့ဖြိုးဆဲနှင့်ဤဆေးသည် spermatozoa ကိုရွေ့လျားစေပြီး implantation ကိုရှောင်ရှားရန်သာကြိုးစားသည့်အခါကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းအဆုံးသတ်ခြင်းကိုရပ်ဆိုင်းလိုက်သည်။
မင်္ဂလာပါ။ ကျွန်ုပ်မှာမေးခွန်းတစ်ခု - လိင်ဆက်ဆံပြီးနှစ်ရက်အကြာ၊ ဆေးသောက်ပြီး၊ ၅ ရက်အကြာငါသွေးထွက်သည်၊ သို့သော် ၄ ရက်သာရှိသေးသည်။ ၇ ရက်ရက်အစဉ်အမြဲငါရာသီလာသည်။ သွေးထွက်လို့ပြောတယ်
ဟယ်လို၊ 1 tablet သို့မဟုတ်2tablet များအကြားခြားနားချက်ကဘာလဲ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဟာ ၁ လက်ပ်ပြားကိုယူခဲ့ပေမယ့်အခုဆိုရင်ငါ ၂ ရှိတယ်လို့ဖတ်နေတာ။ ၁၂ နာရီမပြည့်သေးဘူး။ ဒုတိယထပ်ယူဖို့စောင့်နေရတယ်။ ငါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။
ဟိုဆေး R ဟုသူကပြောသည်
တကယ်တော့ဆေးထိုးမှုက ၁.၅ mcg မဖြစ်သင့်ဘူး၊ တစ်ချိန်တည်းမှာဆေး ၁ လုံးနဲ့ဆေးပြား ၂ ခုစီ ၀.၇၅ မီလီဂရမ်စီရှိတဲ့ဆေးတွေရှိတယ်။ ဒါကြောင့်ဒုတိယဆေးလုံးမှာပထမဆေးလုံးကိုသောက်ပြီး ၁၂ ကိုမျှော်လင့်ထားတယ်။ ဒုတိယဆေးလုံးအတွက်နာရီ။
José R ကိုပြန်ပြောပါ
ဟယ်လိုအချိန်ကာလကိုရုပ်သိမ်းလိုက်တဲ့အောက်တိုဘာ ၉ ရက်၊ ကွန်ဒုံးကျိုးသွားပြီးဆေးသောက်ပြီးနောက် ၄၈ နာရီနဲ့ ၂၄ နာရီကြာအောင်ငါဆေးသောက်လိုက်တယ်၊ သွေးထွက်သံယိုမှုမရှိသလိုငါ့ဆီရောက်လာပြီးတစ်ပတ်ကြာသွားတယ်၊ အခုနို ၀ င်ဘာလမှာမဖြစ်လာဘူး ကျွန်တော့်ဆီလာပါ။
နံနက်တိုင်းအပြီးဆေးပြားသည်သန္ဓေတားဆေးဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည်သင့်လျော်သောအကာအကွယ်မပေးဘဲသို့မဟုတ်၎င်းသည်ပျက်ကွက်ပါကလိင်ဆက်ဆံပြီးနောက် ၇၂ နာရီအတွင်းနှုတ်ဖြင့်ပေးသည်။ ၎င်းကိုဆေးဆိုင်များနှင့်အခမဲ့ဆေးရုံများတွင်ရရှိသည်။ မိန်းကလေးများအနေဖြင့် STDs (လိင်မှတဆင့်ကူးစက်သောရောဂါများ) ကိုစောင့်ကြည့်ပါ။ သတိထားပါ
မင်္ဂလာပါ၊ ကြည့်ပါ၊ ကျွန်ုပ်တွင်သူမဆေးပြားအမှတ် ၆ တွင်ရှိနေသောသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရှိသည်။ ထိုနေ့ကိုသောက်ရန်မေ့သွားသည်။ သူမကည ၈း၀၀ နာရီတွင်ယူသည်။ နောက်နေ့မနက် ၁၁ နာရီတွင်ယူသည်။ မှန်ကန်သောအချိန်ဇယားအတိုင်းဆေးလုံးကိုသောက်ပြီးနောက် ၂ ရက်အကြာတွင်သူမရည်းစားနှင့်အတူရှိနေခဲ့သည်။ သူမအနေဖြင့်ဆက်ဆံရေးပြီးနောက်နှစ်ရက်တွင်သူ့ကိုယ်သူဂရုမစိုက်ခဲ့ပါ။ ကျေးဇူးပြု။ ဖြေပါ!!!
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်သောကြာနေ့ ၂၇ ရက်၊ လိင်မှုကိစ္စပြုခဲ့ပြီးယနေ့နံနက် ၃၀ ရက်တွင်တနင်္လာနေ့တွင်ဆေးလုံးအပြီးမနက်လိုချင်သလား၊ ကျွန်ုပ်အတွက်အကျိုးရှိမည်လား။ ကျေးဇူးပြုပြီးအမြန်ဖြေပါ။
ငါထင်တာငါလွန်ခဲ့တဲ့အပတ်တုန်းကငါ့ရည်းစားနဲ့ဆက်ဆံရေးရှိခဲ့ဖူးတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုရှိခဲ့တယ်။ နောက်တစ်နေ့ငါဆေးလုံးကိုငါယူသွားတဲ့သူနှစ် ဦး အတွက်ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်တယ်။ ဟုတ်ကဲ့၊ အဲ့လိုဖြစ်သွားတာ၊ တကယ်တော့ငါတို့ဟာလိင်ဆက်ဆံတာကိုထပ်ခါထပ်ခါပြုခဲ့တာပဲ။ ကွန်ဒုံးကိုရောမထည့်၊ မခွဲဘူးလား၊ မသိဘူးလားမသိဘူး။ ဒါပေမယ့်အခုပြတ်သွားပြီ။ ငါဆေးကိုထပ်သောက်ချင်တော့ပထမဆုံး ၅ ရက်ထိုးတာ ၅ ရက်ရှိပြီ။ တ ဦး တည်းနှင့်ကငါကနောက်ဆုံးသိမ်းဆည်းရမိဖြစ်လိမ့်မယ်ငါအမှားတစ်ခုခုရှိလိမ့်မယ်ငါလိုအပ်မယ်ဆိုရင်သင့်ရဲ့အဖြေကိုမျှော်လင့်ပါတယ်, ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
မင်္ဂလာပါမိန်းကလေးများ၊ ငါပြောချင်တာကအောက်တိုဘာ ၃၁ ရက်မှာကုန်ဆုံးပြီးတဲ့နောက်နိုဝင်ဘာ ၂ ရက်၊ အင်္ဂါနေ့မှာကျွန်မရဲ့ရည်းစားနဲ့လိင်ဆက်ဆံခဲ့တယ်။ အဲဒါကိုသဘောပေါက်ပြီး ၃ နာရီအကြာမှာ၊ ငါတို့ကြောက်နေတဲ့အတွက်ဆေးတစ်လုံးသောက်ပြီးနောက်တစ်နေ့မှာဆေးသောက်လိုက်တယ်။ ကျွန်ုပ်၏ကာလသည်ဒီဇင်ဘာ ၄ ရက်တွင်ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ၊ ၃၄ ရက်အကြာတွင်၊ ဆေးလုံးသည်အလုပ်လုပ်နေသောမိန်းကလေးများအားမကြောက်ရွံ့ပါ၊ သို့သော်၎င်းသည်သင့်ကျန်းမာရေးကိုပြtoနာဖြစ်စေနိုင်သောကြောင့်၎င်းကိုအရေးပေါ်အခြေအနေများတွင်သာအသုံးပြုရန်ကျွန်ုပ်အကြံပြုပါသည်။ Trankilas သည်ဘ ၀ သည်တိုတောင်းပြီးကျွန်ုပ်တို့အလွန်ဆင်းရဲဒုက္ခခံရန်မလိုပါ။ သူတို့ကကွန်ဒုံးသုံးတယ်၊ မင်းကိုငါပို့လိုက်တဲ့ကြီးမားတဲ့အနမ်းတစ်ခုနဲ့သူငယ်ချင်းဖြစ်ခဲ့ရင်မင်းဟာသန္ဓေတားဆေးကိုသုံးတယ်၊ ပြီးတော့အားလုံးကိုကံကောင်းမယ် :::
ဟဲလို .. ငါအနည်းငယ်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးချင်ပါတယ်။ ငါရည်းစားနဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတယ်။ ငါဟာဘယ်သန္ဓေတားဆေးမဆိုကိုယ်တော့်ကိုဂရုမစိုက်ခဲ့ဘူး။ တစ်ပတ်အကြာမှာဘာဖြစ်ခဲ့လဲ .. ဒီရက်သတ္တပတ်မှာငါထပ်မံပေါင်းသင်းဆက်ဆံမှုတစ်ခုထပ်တူထပ်တူဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ လတစ်လအတွင်းတွင်ဤဆေးပြားကိုအကြိမ်ပေါင်းများစွာသောက်ခြင်းသည်မည်သည့်ပြtypeနာကိုမှမဖြစ်စေပါ။
တစ်နေ့ပြီးတစ်နေ့ဆေးနှစ်ရက်သောက်ခြင်းကဘယ်လိုကွာခြားသလဲ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါကဆေးနှစ်မျိုးရှိတယ်ဆိုတာငါနားလည်တယ်။ တစ်ခုကလိင်ဆက်ဆံပြီးနောက် ၇၂ နာရီအတွင်းကာကွယ်ပေးတယ်။ နောက်တစ်ခုကနောက်ကျတာနဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိတယ်။ တစ်ရက်ထက်နောက် ၂ ရက်ဆေးလုံးနဲ့နောက်ဆက်တွဲပြeverythingနာကိုတစ်လမပြည့်ခင်ရှင်းပြချင်တယ်၊ ဒီဆေးလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါသိချင်တယ်။ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်!!! အနမ်း
ငါရည်းစားနဲ့လိင်ဆက်ဆံပြီး ၂ နာရီအကြာမှာငါသန္ဓေတားဆေးကိုဘာကြောင့်သောက်တာလဲ၊ ဒါကပိုပြီးထိရောက်တာလား။
ဒီလ၊ ဒီဇင်ဘာမင်္ဂလာပါကျွန်ုပ်သည်ရည်းစားနှင့်အတူ ၆ ယောက်မြောက်တစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး ဂရုမစိုက်ဘဲဖြစ်ပျက်ခဲ့သော်လည်းသုံးရက်မြောက်သောနေ့၌ကျွန်ုပ်ဆေးလုံးကိုသောက်သုံးခဲ့ပြီး ၁၄ ရက်တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ဆေးလုံး !! သင်တစ်လတည်းတွင်နှစ်ကြိမ်သို့မဟုတ်ထို့ထက်ပိုသောဆေးများသောက်လျှင်ဘာဖြစ်မည်နည်း။ ဒါကြောင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုယူပါသလား ??
လွန်ခဲ့သောတစ်လကျော်ကတတိယသန္ဓေတားဆေးကိုမေ့သွားသည်။ နောက်တစ်နေ့တွင်၎င်းသည်မေ့လျော့။ ဆေးတစ်လုံးသောက်လိုက်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ရည်းစားနှင့်အတူရှိခဲ့ပြီးနောက်တစ်နေ့တွင်နံပါတ် ၃ နှင့်ကျွန်ုပ်သည်မေ့နေကြောင်းသတိပြုမိသည်။ ငါသောက်လိုက်တယ်။ ငါဆေးသောက်ပြီးတဲ့နောက်မနက်မှာယူဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်၊ ငါရည်းစားနဲ့အတူ ၂၄ နာရီမပြည့်ခင်ငါယူမယ်။ ၂ ရက်၊ သုံးရက်အကြာမှာကျွန်တော့်ဆီလာတဲ့အညိုရောင်တစ်ခုခုလာပြီး၊ ဆေးလုံးကမင်းအတွက်အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်မင်းကိုလာရမယ်လို့ပြောတယ်။ ကျွန်တော့်ရာသီလာခြင်းမတိုင်မီ ၅ ရက်အကြာမှာဒီအညိုရောင်လိုကျွန်တော့်ဆီရောက်လာတယ်။ ပြီးတော့ငါလစဉ်လတိုင်းငါ့ရာသီလာတာအဆင်ပြေပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့် .. အဲ့ဒီလမှာဖြစ်ခဲ့တာ၊ အခုငါအခြားဆေးပြားတစ်ဘူးကိုစတင်လိုက်တယ်။3တန်းအတွက်မီတာ။ ဒါပေမယ့်ငါမှာခဲယဉ်းတဲ့ဗိုက်ရှိတယ်။ နို့သီးခေါင်းလေးတွေပေါ်မှာအစက်အနည်းငယ်လေးရှိတယ်။ ငါ့သူငယ်ချင်းတစ် ဦး မှာကိုယ်ဝန်ရှိနေပြီးသူတို့တွင်များစွာသောသူများရှိသည်။ ငါအရမ်းကြောက်တယ်။ ငါ၌ကိုယ်ဝန်ရှိရန်အခွင့်အရေးရှိပါကကျွန်ုပ်အားပြောပြရန်လိုသည်
သူကငါမပြီးနိုင်ဘူး၊ ငါမယုံဘူး၊ ငါဆေးသောက်ချင်တယ်၊ ငါ့ကိုသောက်ဖို့အကြံပေးလား။ ဆေးဆိုင်မှာတိုက်ရိုက်ဝယ်လို့ရပါသလား ??? ဆေးညွှန်းမပါဘဲ
ဟယ်လိုကျွန်ုပ်သည်အကာအကွယ်မရှိဘဲလိင်ဆက်ဆံခဲ့သော်လည်းအချိန်ကာလမရောက်သေးသော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်သည်ပထမ ဦး ဆုံးဆေးလုံးကို ၁၂ နာရီမတိုင်မီသောက်ပြီးလျှင်နောက်တစ်နေ့တွင်၎င်း၊ ကျွန်ုပ်မေးခွန်းမှာ - ၎င်းသည်ရောက်ရှိပြီးကတည်းကဒုတိယဆေးလုံးကိုသောက်ရန်လိုအပ်ပါသလား။
ကိုယ့်ငါ့လက်ချောင်းထားd။ ငါကိုယ် ၀ န်ကိုအန္တရာယ်ပြုနိုင်မလားသိချင်တယ်။ ငါဆေးလုံးကိုသောက်ပြီးပြီဆိုတော့ငါလက်ချောင်းတစ်ချောင်းနဲ့တစ်ချောင်းလောက်သောက်ရမယ်ဆိုရင်ငါပိုရနိုင်မလားဆိုတာသိချင်တယ်။ ရုံအလုပ်ကနေအက်ခဲ့ကြ ... စကားပြော finish finish ကိုနှင့် finish ကို !!!!
ငါသံသယရှိသည် ... ။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်၏ရည်းစားသည်ညတစ်ညတွင် ၃ ကြိမ်နှင့်အခြား ၄ ခု၌ကျွန်ုပ်အတွင်း၌ ၀ င်ရောက်လျှင်ဘာဖြစ်မည်နည်း။ ကျွန်ုပ်တွင်ကိုယ်ဝန်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည်။ မထင်ပါ။
ငါရည်းစားနှင့်အတူနေခဲ့မေးခွန်းတစ်ခုရှိသည်နှင့်ငါတညဉ့်၌သုံးကြိမ်နှင့်အခြား၌3... အတွင်း၌အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ ငါကိုယ်ဝန်ရှိနေ ဦး မှာလား ငါမစဉ်းစားပေမယ့်ကိုယ့်ကိုငါမေးလျှင်အမှု၌!
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်အကူအညီလိုအပ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်၏နောက်ဆုံးရာသီသည်ဒီဇင်ဘာလ ၁၆ ရက်၊ ၂၀၀၉ တွင်ဖြစ်ပြီး၊ ကျွန်ုပ်၏ချစ်သူနှင့်မဆက်ဆံရေးမှာဇန်နဝါရီ ၃၊ ၂၀၁၀ နံနက် ၁ နာရီတွင်ဖြစ်သည်။ သို့သော်သူသည်လိင်တံမသုတ်သင်မီသူ၏လိင်တံကိုထုတ်ယူခဲ့သောကြောင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုပြတ်တောက်သွားသည်။ .. ငါ့ရဲ့ကာလဟာ ၂၃ ရက်ကနေ ၂၆ ရက်ကြား .. ငါဟာအန္တရာယ်ရှိနိုင်မလားသိချင်တယ်။ ဆေးသောက်ပြီးနောက်မနက်မှာငါသောက်သင့်တယ်။
ကျေးဇူးပြု၍ ကူညီပေးပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်သည်သောကြာနေ့၌ကျွန်ုပ်လိင်သံသယရှိစရာမလိုပါ။ စနေနေ့တွင်ကျွန်ုပ်သည်လိင်ဆက်ဆံခဲ့သည့်တနင်္လာနေ့တွင်ဆေးလုံးကိုသောက်ခဲ့သည်။ အင်္ဂါနေ့တွင်သူတို့ကိုပြန်လည်ခေါ်ယူခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ခန္ဓာတွင်ရှုပ်ထွေးမှု (သို့) ကျွန်ုပ်သည်တစ်စုံတစ်ခုတွင်ကျွန်ုပ်အပေါ်သက်ရောက်မှုရှိနိုင်ပါက ကျေးဇူးပြု၍ ဖြေပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ကျွန်ုပ်သည်ဤဆေးပြားများကိုသန္ဓေတားနည်းတစ်မျိုးအဖြစ် သုံး၍ ဖြစ်နိုင်သည်ဟုထင်ပြီး၊
ငါ yuzpe ပြီးနောက်နေ့၏ဆေးလုံးကိုငါသံသယရှိသည်ငါသူတို့ကိုငါအန်ထုတ်ဒုတိယဆေးလုံးကိုယူပြီး7နာရီအကြာတွင်ဖြစ်ပျက်သောအဘယ်သို့ဖြစ်ပျက်သူတို့ကိုငါယူပေမယ့်ငါသိလိုအများကြီးမဟုတ်ပါဆေးလုံးအတူတူရှိလိမ့်မည်ဆိုပါက အကျိုးသက်ရောက်မှု?
ငါမေးခွန်းတစ်ခုရှိတယ်၊ ငါအရမ်းစိတ်လှုပ်ရှားလို့မင်းငါ့ကိုပြန်ဖြေမယ်လို့မျှော်လင့်တယ်။ ငါရည်းစားနဲ့ဆက်ဆံရေးရှိခဲ့တယ်။ သူကကျွန်မကိုမသိလိုက်ဘူး၊ အဲဒီနောက် ၂ ရက်ကြာပြီးတဲ့နောက်ကျွန်မတို့ကနောက်တဖန်လိင်ဆက်ဆံခဲ့ပြီးသူကကျွန်မကိုထပ်မံတွေ့ဆုံခဲ့တယ်။ ငါနောက်တစ်နေ့ငါဆေးသောက်ပြီးကြောင်းပြီးသွားပြီဆိုတာသတိပြုပါ .. သူကသူကအရင်ကသူကငါ့ကိုအတွင်းပိုင်းကိုပြီးသွားပြီဆိုတော့ငါ့မေးခွန်းကဒီဆေးလုံးက ၇၂ နာရီပဲ၊ ငါ PASSED လို့ထင်တယ်၊ ကျွန်မကိုယ်ဝန်ရှိပါတယ်? ဒါမှမဟုတ်ငါရာသီလာရင်နောက်ကျလိမ့်မယ်။ ငါအရမ်းစိုးရိမ်လို့မင်းကိုငါစောင့်နေတယ်၊ ​​မင်းငါ့ကိုဂရုစိုက်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်မေးခွန်းတစ်ခုမေးချင်ပါသည်။ ဇန်နဝါရီ ၄ ရက်တွင်ကျွန်ုပ်၏ရည်းစားနှင့်ပထမဆုံးအကြိမ်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်စိတ်မသက်မသာခံစားမိသည်။ သို့သော်မနက် ၃း၀၀ နာရီတွင်တစ်နေ့လျှင်ဆေးလုံး ၀ ယ်ပြီးစိုးရိမ်ခဲ့သည်။ ငါ၌အာရုံကြောအချို့ရှိနေသည်။ အလွန်အိပ်ချင်နေပြီ။ ကိုယ်ဝန်မရှိကြောင်းသေချာသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသလား။ ၁၂ နာရီလျှင်လေးကြိမ်ဆေးသောက်သည်။ အဆင်ပြေသလားသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်သောက်သင့်သောအရာသည်အလွန်နည်းသလားကျေးဇူးတင်ပါသည်။ မင်းရဲ့တုန့်ပြန်မှုကိုငါမျှော်လင့်ပါတယ်
အကယ်၍ သင်သည် ၄ ​​ရက်မြောက်နေ့တွင်ဆေးလုံးကိုသောက်လျှင်၊ ၎င်းသည်မည်သည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသနည်း။
ကျွန်ုပ်သည်အကာအကွယ်မဲ့အမျိုးသမီးနှင့်လိင်ဆက်ဆံခဲ့ပြီးနာရီ ၃၀ ခန့်အကြာတွင်သူမသည်အရေးပေါ်သန္ဓေတားနည်းကိုစတင်ခဲ့သည်။ ၎င်းတွင်အစတွင် ၄ ဆေးနှင့် ၁၂ နာရီနောက်ပိုင်း ၄ ခုပါဝင်သည်။ သူမအသက် ၁၂ နှစ်မှ ၁၃ ရက်သာရှိသေးသည်။ ဤဆေးသောက်ခြင်း၏ဆိုးကျိုးများမှာမူးဝြေခင်းနှင့်အထွေထွေညံ့ဖျင်းခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ အခုထိ (မင်းရဲ့ကာလ ၂၅ ရက်) အုပ်ချုပ်မှုမရှိသေးဘူး။ လွန်ခဲ့သောတစ်ရက်ကသူသည်နောက်တစ်ကြိမ်မျိုချမိခဲ့သော်လည်းဤအကြိမ်တွင်သွေးပေါင်ချိန်ကျဆင်းခြင်း (အစမှာဆေးပြား ၅ ခုနှင့် ၁၂ နာရီအကြာတွင် ၅ ခု) ။ ဒီနောက်ခံနဲ့ကိုယ်ဝန်ရနိုင်ခြေကိုငါသိချင်တယ်။ ငါချက်ချင်းတုံ့ပြန်မှုမျှော်လင့်ထား။
kedar ကိုယ်ဝန်ကနေငါ posivilidades ငါ့စည်းကမ်းပြီးသွားပြီးနောက်6ရက်လျော့နည်းသွားခဲ့ရသည်
ယောရှု BE ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်၏ကလေးငယ်များနှင့်အဆက်အစပ်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်သည်မိမိ၏ ၃ ရက်မြောက်နေ့၌သူသည်ငါ့ကိုလက်ခံရန် POSTINOL3 ကိုဝယ်ယူသည်။ သို့သော်၎င်းကိုကျွန်ုပ်လုပ်ဆောင်သင့်သည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ။ ကျွန်ုပ်သည်ဆေးလုံးကိုယူနိုင်၊ ကျွန်ုပ် IT ကိုမယူပါကကျွန်ုပ်သည် ပို၍ နိမ့်သောကာလတွင်နေရန်ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ဒီနေ့ချက်ချင်းတုံ့ပြန်ပါ
JOSI SER သို့စာပြန်ပါ
ငါဒီနှစ်ဇန်နဝါရီလ ၇ ရက်နေ့မှာပထမဆုံးလိင်ဆက်ဆံခဲ့တယ်။ အရေးပေါ် pin ကိုသုံးတယ်၊ ငါကောင်းကောင်းယူခဲ့တယ်၊ ငါသွေးထွက်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်အဲ့ဒီနေ့တွေမှာခေါင်းမူးခြင်းသို့မဟုတ်အော့အန်ခြင်းမရှိခဲ့ဘူး။ သုံးပြီးနှင့်ရာသီလာခြင်းမျှော်လင့်ထားသောနေ့၌ကျွန်ုပ်၏အလှည့်ဖြစ်သည့်နေ့၌ရောက်ရှိလာသည်။ ယခုတစ်ပတ်မှယခုတွင်ငါသည်မူးဝြေခင်း၊ ဦး ခေါင်း၏အသံနှင့်ကျွန်ုပ်သည်ကိုယ်ဝန်နိမ့်ခဲ့သော်လည်းကိုယ်ဝန်ဆောင်နိုင်သည်ဟုထင်သည် ငါ့စီရင်ချက်မှန်သည်မဟုတ်လော။ အဖြေ plizz ငါ့ကိုကူညီပါ
ခင်ဗျားကိုဒီဆေးကိုဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုတာငါ့ကိုနည်းနည်းရှင်းပြပေးချင်ပါတယ်။ ပထမဆုံးအကြိမ်ထွက်တော့မယ်။ ကိုယ် ၀ န်မကျန်တော့တာကိုနည်းနည်းကြောက်တယ်။
အိုလာကျွန်ုပ်၏ရည်းစားနှင့် ၅ ရက်ကြာဆက်ဆံရေးမရှိသော်လည်းနာရီအကြာတွင်နောက်တစ်နေ့ဆေးသောက်လိုက်သည်။ လေးရက်အကြာတွင်သွေးထွက်ခဲ့ရသည်၊ ဤသွေးထွက်ခြင်းသည်အဘယ်အရာကိုဆိုလိုသနည်း။ ပြီးတော့လိင်ဆက်ဆံပြီးနောက်ငါမူးဝြေခင်းကိုစက်ဆုပ်ရွံရှာခြင်းသို့မဟုတ်စက်ဆုပ်ရွံရှာခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အမှန်တရားမှာ၊ ကျွန်ုပ်သည်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရန်အလွန်ကြောက်ရွံ့ပါသည်၊ ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်ကိုကူညီပါ။
ဟိုင်း! ငါရည်းစားနဲ့လိင်ဆက်ဆံပြီးနောက်နံနက်ခင်းကိုဆေးသောက်ပြီးတဲ့နောက်မနက်မှာငါယူခဲ့တယ်၊ ငါပရိုဖိုင်းကိုစားခဲ့ပေမဲ့လည်းကွဲသွားတယ်။ ငါ ၅ ရက်လောက်သောက်ပြီးပြီ။ ငါဆုံးရှုံးမှုတွေရှိလားပုံမှန်လား။
မင်္ဂလာပါ၊ အနည်းငယ်စိတ်ပူမိပါတယ်၊ နောက်တစ်နေ့အတွက်ဆေးလုံးဟာအန္တရာယ်ကင်းလား၊ ကိုယ်ဝန်မရနိုင်အောင်သိချင်လို့ပါ။ နောက်တစ်နေ့မှာကျွန်တော်ဆေးသောက်ပြီးနောက်မှာ၊ ကျွန်မရည်းစားနဲ့လိင်ဆက်ဆံခဲ့တဲ့နှစ်ပါ။ လက္ခဏာများ၊ သို့သော် ၁ ရက်နှင့် ၁၆ ရက်အကြာတွင်ကိုယ်ဝန်ရှိနေသည်ကိုကျွန်ုပ်အံ့သြမိသည်။
ဒီနှစ်မှာငါဟာဆေးတွေကိုထပ်သောက်ပေမဲ့လည်းကိုယ်ဝန်ရခဲ့တယ်………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… I the the This”” ဒီတစ်ခါဒီဆေးတွေကိုငါထပ်သောက်ရင်တောင်ကိုယ်ဝန်ရလာတယ်။ ?????? ။ တစ်ယောက်ယောက်ကိုဒီအကြောင်းကိုရှင်းပြစေချင်ပါတယ်
မင်္ဂလာပါ၊ တိုင်ပင်လိုသည်၊ ဇန်နဝါရီလတွင်ကျွန်ုပ်သည်မမှန်ပါ။ ကျွန်ုပ်၏အချိန်ကာလမှာ ၂၆ ရက်တွင် ၃၁ ယောက်မြောက်ဖြစ်ပြီး၊ နောက်တစ်နေ့ဆေးသောက်ပြီးနောက်တစ်နေ့တွင်၊ ၅ ရက်တွင် ၄ ရက်သွေးထွက်ခြင်း၊ ကျွန်ုပ်ကြောက်ပါသည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါဘယ်လောက်အထိလာရမလဲဆိုတာမသိဘူးလေ။ မတ်လမှာ၊ ငါဟာသွေးထွက်သံယိုမှု ၄ ရက်ကိုဖေဖော်ဝါရီလကာလလို့ရေတွက်ပြီးအဲဒီလိုဟုတ်မဟုတ်မသိဘူး။ ကျေးဇူးပြု၍ အရေးပေါ်အဖြေလိုအပ်ပါတယ်
မင်္ဂလာပါ၊ ခင်ဗျားကိုမေးခွန်းတစ်ခုမေးချင်ပါတယ်။ ဖေဖေါ်ဝါရီ ၂၇ ရက်မှာအကာအကွယ်မရှိဘဲလိင်ဆက်ဆံခဲ့တယ်၊ တစ်နာရီခွဲကြာရင်ငါဆေးသောက်လိုက်တယ်။ ဒီနေ့ ၁၁ ခုရှိတယ်၊ ဘာမှမဖြစ်လာဘူး။ ဒါ့အပြင်ငါ့ရဲ့အပြစ်ရှိသူတွေကငါနာကြည်းခဲ့တယ်…ငါယူခဲ့တယ် ငါဆေးသောက်ပြီးတာနဲ့၊ စမ်းသပ်မှုကငါ့ကိုစိတ်ချစေသလားဒါမှမဟုတ်ငါထပ်စောင့်ရ ဦး မလား။
မင်္ဂလာပါ၊ ဆေးလုံးနဲ့ပါတ်သက်တဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေအများကြီးဖတ်ခဲ့တယ်။ ကံကောင်းတာကငါတစ်ခါမှမသောက်ခဲ့ဘူး၊ ငါစုံတွဲတစ်တွဲ၌ငါငါ့ကိုဂရုမစိုက်ဘူးသောအမှုပေးထားသည်နှင့်အတွင်းပိုင်း၏အဆုံးလည်းထိုအမှု၌ထိရောက်ပါသလဲ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
မင်္ဂလာပါ ၂၄ ရက်၊ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ရည်းစားနှင့်ဆက်ဆံရေးရှိခဲ့သည်။ သို့သော်သူသည် ဦး ခေါင်းကိုတင်ခဲ့သည်၊ ကျွန်ုပ်သည်အပျိုစင်ဘဝကိုဆုံးရှုံးခဲ့ပြီး၎င်းနှင့်မတူပါ။ သို့သော်သူသည်ကျွန်ုပ်ကိုလက်ကိုင်ထားခြင်းမရှိသော်လည်း ၉ နှစ်၌ငါဆေးသောက်ခဲ့သည့် ၂၅ ရက်တွင်သူကအာမခံသည်။ မနက် ၉ နာရီမှည ၁၂ နာရီအချိန်ညအိပ်နာရီ၊ တစ်နာရီ၊ ဘယ်ကနေငါပျောက်သွားတာလဲ၊ ငါသံသယနှင့်ကြောက်ရွံ့မှုများစွာဖြင့်ကျန်ရစ်ခဲ့ပြီး၊ ဆေးလုံးကိုယူပြီးဆီးထဲ၌ ၂၆ သွေးရှိသည်။ အဘယ်ကြောင့်ကိုယ်ဝန်ရှိသင့်သနည်း။ ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်အားဖြေဆိုရန်တိုက်တွန်းပါရစေ .. : S
မင်္ဂလာပါ၊ နောက်တစ်နေ့သောက်ဆေးကိုအကြိမ်ပေါင်းများစွာ၊ ၁ နှစ်မှ (၁၀) ကြိမ်အကြိမ်ကြိမ်သောက်ခဲ့ပါတယ်။ လွန်ခဲ့သော ၄ လကျော်ကကျွန်ုပ်မယူခဲ့ပါ။ ကျွန်ုပ်သည်မွေးဖွားခြင်းနှင့်အနာဂတ်မွေးဖွားခြင်းကိုအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိမရှိသိချင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
မင်္ဂလာပါ၊ မေလ ၂၁ ရက်ရောက်လာပါပြီ။ ရက်အနည်းငယ်အကြာမှာကျွန်မရည်းစားနဲ့အဆင်ပြေခဲ့ပြီးတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ဂရုမစိုက်ခဲ့ကြဘူး။ ၂ ရက်ကျော်သွားပြီးနောက်တစ်နေ့၏ဆေးလုံးများအကျိုးသက်ရောက်မလားဆိုတာသိချင်ခဲ့တယ်။ အကယ်၍ ၎င်းသည်ရာသီလာခြင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနိုင်သည်သို့မဟုတ်မရှိပါက ... အကယ်၍ ငါဆေးသောက်ပြီးနောက်မနက်ကိုယူလျှင်၊ ကျွန်မကိုယ်ဝန်မရရှိပါသလား။ ကျွန်ုပ်သည်အရေးပေါ်တုံ့ပြန်မှုလိုအပ်လိမ့်မည်။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
vdd ၌ကျွန်ုပ်သည်ဤစာမျက်နှာကိုအလွန်ကြိုက်နှစ်သက်သည်။ အကြောင်းမှာ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ကိုသံသယများစွာမှကင်းဝေးစေပြီးအလွန်ကောင်းသောအသေးစိတ်အချက်အလက်နှင့်ရှင်းသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်!
ငါမေးခွန်းတစ်ခုရှိတယ်၊ ငါဆေးကိုသောက်လိုက်တယ်။ သုံးလအကြာမှာ၊ ငါသွေးစုပ်လာတယ်။ ယူပြီးတစ်ပတ်အကြာမှာငါအကာအကွယ်မဲ့လိင်ဆက်ဆံတာကိုထပ်လုပ်သင့်တယ်။ ငါထပ်သောက်သင့်သလား။ သို့မဟုတ်ဆေးလုံး၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကို၎င်းသည်မလိုအပ်ဘဲဖြစ်စေပါသလား။
ယခုလ ၁၉ ရက်နေ့တွင်ကျွန်ုပ်သည်အကာအကွယ်မဲ့သောဆက်ဆံရေးများရှိခဲ့သော်လည်း၊ ယခုလ ၂၁ ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ညနေ ၁၂း၃၀ တွင်ကျွန်ုပ်ဆေးသောက်ပြီးနောက် ၁၂ နာရီအကြာတွင်နောက်လာမည့်ဆေးကိုသောက်ပါက xfa ဖြေဆိုပါ။ !
ဟဲလိုငါဒီဆေးကိုတစ်ခါမှမသောက်ဖူးဘူး၊ ဒီနေ့အထိလိုက်လုပ်နေတယ်။ နောက်နေ့ည ၁၀ နာရီမှာငါရည်းစားနဲ့လိင်ဆက်ဆံခဲ့တယ်။ ငါဆေးပြားကိုဘယ်တော့မှမယူဘူး။ (၁၂) နာရီအကြာဒုတိယအကြိမ်ယူရန်ငါပထမ ဦး ဆုံးစိုးရိမ်ပြီးပထမ (၁၇) နာရီတွင်ထွက်ပါကအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိမည်လားသို့မဟုတ်ကိုယ်ဝန်ရနိုင်မည်လား။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Aller သည်ငါရာသီလာသောအခါသံသရာပြီးသွားသည်။ ငါနှင့်ရည်းစားနှင့်လည်းလိင်ဆက်ဆံခဲ့သည်။
ဟယ်လို။ ငါနောက်တစ်နေ့၏ဆေးလုံးကိုယူ။ ကငါ့ထံသို့လာ။ ပေမယ့်သေးငယ်တဲ့အရေအတွက်နှင့်တစ်နေ့သာ။ ပုံမှန်လား?
စိတ်မပူပါနဲ့၊ ၇၂ နာရီအကြာမှာကျွန်တော်ယူလိုက်ပါတယ်၊ ဒါကကျွန်တော့်ဆီရောက်လာပါတယ်။ ဒါပေမယ့်တစ်နေ့ပဲရောက်လာလို့ကျွန်တော်စိုးရိမ်ပါတယ်။ ငါကိုယ် ၀ န်ကိုစမ်းသပ်တယ်
ဒီဆေးတွေကိုမကြာခဏစားမိရင်ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိချင်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါမတော်တဆမှုအသေးစားလေးတစ်ခုကြောင့်တစ်လကိုတစ်လသောက်နေတယ်။ helpaaaaaaaaaaaa
ပြီးခဲ့သည့်ညကကျွန်ုပ်၏ရည်းစားနှင့်အတူကွန်ဒုံးပြproblemနာရှိခဲ့သည်။ ငါ antikoagulated ဖြစ်၏, ငါ့ကိုသင်အကြံပေးချင်ပါတယ် .... ။ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်!
ဟယ်လိုကျွန်ုပ်၏စိုးရိမ်ပူပန်မှုသည် ... ငါဇူလိုင် ၃၁၊ သြဂုတ် ၂ ရက်တွင်ငါနှင့်သက်ဆိုင်သောနေ့၏ပထမနေ့၊ ၃ ရက်၊ စက္ကန့် ၃ ရက်မြောက်နေ့။ ထိုအခါငါ31ဂုတ်2ရက်နေ့တွင်ဆက်ဆံရေးရှိခဲ့ပါတယ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မယ်ဒါပေမဲ့အပြင်ဘက်မှာအဆုံးသတ်, ငါသြဂုတ်လ3ရက်နေ့တွင်အောက်ပါနေ့ရက်ကာလကိုငါဆင်းသက်လာ 14 သြဂုတ်သြဂုတ်လ 15 ရက်သြဂုတ်လ 20 ရက်သြဂုတ်လ 19 ရက်သြဂုတ်လ 14 ရက်သြဂုတ်လ 19 ရက်သြဂုတ်လ XNUMX ရက်သြဂုတ်လ XNUMX ရက်သြဂုတ်လ XNUMX ရက်သြဂုတ်လ XNUMX ရက်သြဝါဒက XNUMX သို့မဟုတ် XNUMX နေ့၌, ငါ၏ရင်ပတ်အနာနှင့်အလွန်အမင်းမျောနေကြသည်ငါခေါင်းကိုက်ခြင်းနှင့်အသေးစား Ovarium နာကျင်မှုရှိသည်။ သင့်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နှင့်မကြာမီသင့်တုံ့ပြန်မှုအတွက်စောင့်ဆိုင်း။
ငါမနေ့ကငါလိင်ဆက်ဆံပြီးကိုယ့်ကိုကိုယ်ဂရုမစိုက်ဘူး။ နောက်တစ်နေ့မှာခေါင်းကိုက်ခြင်းနှင့်ကိုယ်ဝန်ရှိသလားဆိုတာကိုငါမသိ၊ ယခုငါသောက်လျှင်ဆေးလုံးအလုပ်လုပ်နိုင်သလား။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည် ၂ လခန့်မိခင်တစ် ဦး ပါ။ သဘာဝမွေးဖွားခြင်းကိုသင်တွေ့ရပါလိမ့်မည်၊ ကျွန်ုပ်သည်ကိုယ်ဝန်ရှိနေလျှင်မည်သို့သိနိုင်သနည်း။
ငါဆေးသောက်ပြီး ၅ လမှာ ၆ ကြိမ်သောက်တယ်၊ ဒီနေ့ငါဂိုဏ်းကိုယူပြီးအစာအိမ်နာတယ်။ သူကငါမသိတဲ့အရာတစ်ခုခုပေးပြီးသွေးနှစ်မျိုးစွန်းနေတယ်ဆိုတာငါကြောက်တယ်။ မိန်းကလေးတော်တော်များများကငါ့ကိုပြန်ပြောပါ
ကျွန်ုပ်သည်ဒေါက်တာ Andrea ဖြစ်ပြီးယနေ့ခေတ်အရေးပေါ်သန္ဓေတားခြင်းအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်အမြောက်အမြားရှိကြောင်း၊ ဆယ်ကျော်သက်များသည်ဤနည်းလမ်းကိုအလွဲသုံးစားပြုခြင်းနှင့်အလွဲသုံးစားပြုခြင်းများပြုလုပ်နေသည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်ပါသည်။ စိုးရိမ်စရာအကောင်းဆုံးအရာမှာအမှန်တကယ်တွင်အရေးပေါ်အခြေအနေအတွက်သာဖြစ်သောဤဆေးလုံးကိုမှီခိုအား ထား၍ မရသောဆက်ဆံမှုများရှိနေရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုဆေးဝါးများအလွယ်တကူရရှိနိုင်သောကြောင့်၎င်းကိုမသုံးစွဲမီဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ခြင်းမပြုပါ။ သို့သော်၎င်းတို့ကိုအသုံးပြုပြီးနောက်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအချို့သည်ဆရာ ၀ န်နှင့်ဆွေးနွေးရန်အရေးကြီးကြောင်းတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။
07/08 တွင်ငါ့ရည်းစားနှင့်ဆက်ဆံရေးရှိခဲ့သည်, ငါတို့ကွန်ဒုံးနှင့်အတူမတော်တဆမှုရှိခဲ့ပါတယ်။ နောက်တစ်နေ့ ၂၄ နာရီအကြာတွင်ငါဆေးသောက်လိုက်သည်။ 24/16 တွင်ငါရာသီလာသောအခါ 08/01 ရက်နေ့တွင်ငါရာသီလာခဲ့သည်။ နောက်တဖန်မလာ၊ ငါပုံမှန်အားဖြင့် ၂၅ ရက်တခါ ၃၅ ရက်ကုန်သွားတယ်။ ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်သည်တုံ့ပြန်မှုကိုမျှော်လင့်နေပါသည်။
ဟိုင်း၊ ငါစိတ်ပူနေတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်ပါ၊ ဒါပေမယ့်မနေ့ကငါမလုပ်သင့်တဲ့အရာတွေကိုလုပ်ခဲ့တယ်၊ ငါကခရုပေါ်ကိုဆုပ်ကိုင်ထားတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါ Lollipops အိတ်တစ်လုံးဝယ်ဖို့မေ့သွားတယ် သူကကပ်ထားပြီးကတည်းကဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူး၊ အနည်းငယ်ထိလိုက်ပြီးဒုတိယအကြိမ်နှောင့်နှေးနေလို့ကောင်းတဲ့အချိန်မှာလောင်းနေပြီ။ ဒါပေမယ့်ငါတိုက်တွန်းလို့မရဘူး၊ ၂၄ နာရီအကြာမှာငါလုပ်ခဲ့တာတွေကိုငါလုပ်ခဲ့တယ် ငါထထသောအခါ Viagra ကိုဝယ်ခြင်းငှါပို့သောအခါရပ်တန့်ခဲ့ရသည်။
ထိုအခါ mandingo တစ်ယောက်ရောက်လာပြီးသူဘာလုပ်ရမှန်းမသိခဲ့ပါ၊ သူ၏ ဦး ခေါင်းသည်နှင်းဆီပန်းသီးနှင့်တူ၏။
ထို နေ့မှစ၍ ကျွန်ုပ်အရည်ကျိုပြီးလူတစ်ယောက်၏ခန္ဓာကိုယ်ထဲတွင်ပိတ်မိနေကြောင်းသိသည်။
att: horny renzo aliga နှင့် jarlin michel lopez carranza နှင့် leoncio ledesma alvaradop နှင့် jhonatan panduro aliga အားလုံးသည်ကျွန်ုပ်၏အုပ်စုမှဖြစ်သည်။
atte: giancarlo ဘီးများ
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည် "Follow you" ဆေးကိုယူပါကကျွန်ုပ်၏လိင်ဆက်ဆံခြင်းမတိုင်မီနှင့်ကျွန်ုပ်၏မျိုးဥထွက်ချိန်တစ်မိနစ် (တစ်ချိန်တည်း) တွင်၊ AbAbatoratorios Raffo ဆေးကိုသောက်ပါက၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အကြာတွင်နာရီပေါင်းများစွာသောက်လျှင်ထက်ထိရောက်မှုနည်းသလား။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
မင်္ဂလာပါ ကျွန်ုပ်သည်သောကြာနေ့တွင်အကာအကွယ်မရှိဘဲဆက်ဆံရေးရှိပါကစနေနေ့တွင်အရေးပေါ်ဆေးများသောက်ပြီးလျှင်တနင်္ဂနွေနေ့တွင်ကျွန်ုပ်သည်အခြားဆက်ဆံရေးတစ်ခုရှိပြီးကွန်ဒုံးပျက်နေလျှင်။ ငါနောက်ထပ်အရေးပေါ်ဆေးလုံးဒါမှမဟုတ်စနေနေ့မှာငါသောက်နေတာဟာငါ့အပေါ်မှာအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနေသေးတာကိုတွေ့ရမယ်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်၏မေးခွန်းကဒီနေ့ဆေးလုံးကိုယူပြီး၊ ၁၀ ကိုကြည့်ပါ။ ကောင်းပြီ၊ ဒုတိယတစ်ခုကိုလည်း ၁၀ တွင်သောက်သင့်သည်။ သို့သော် ၄ မိနစ်ခန့်သင်တစ်ခုခုပြုလုပ်ခဲ့သည်ဟုထင်ပါသလား ???? မင်းရဲ့အဖြေကိုငါစောင့်နေတယ်၊
မင်္ဂလာပါ၊ မနက် ၂၆ ရက်နံနက် ၁၁း၂၆ တွင်ကျွန်ုပ်၏ကောင်လေး0နှင့်အဆက်အသွယ်ရှိခဲ့သည်။ ယနေ့ဆေးလုံးသည်ဆေးလုံး၏အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသလား။ ကျေးဇူးပြု၍ အဖြေကိုအမြန်ဆုံး grax လိုအပ်သည်
လွန်ခဲ့သော ၁ ပတ်ကကျွန်ုပ်၏ရည်းစားနှင့်လိင်ဆက်ဆံခဲ့ပါသလား။ နောက်တစ်နေ့ငါဆေးသောက်လိုက်တယ်။ ကျွန်မရဲ့အချိန်ကာလကသတ်မှတ်ထားတဲ့နေ့မှာပဲရောက်လာတယ်။ ဒါပေမယ့်အဲ့ဒီလမှာပဲပြန်ဖြစ်တယ်။
ဘာလို့လဲဆိုတော့ ... ဆေးကြောင့်ကြောင့်လား ???? ကျေးဇူးတင်ပါသည်..
ဟဲလို .. ငါ zoy muzho မသုံးပါက laz paztillaz ကိုသုံးပါ။ ဒါပေမယ့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဂရုစိုက်ဖို့၊ ပိုချစ်တာနဲ့ဇက်ဇီ zta ကောင်းကောင်းမပြောဘဲငါလိင်ဆက်ဆံပြီးနောက်တစ်နေ့မှာ paztilla dl ကိုယူတာကိုပိုနှစ်သက်တယ်။ , ozea dezpuezd5 minutesz maz o Menoz သည်ပထမအကြိမ်ယူပြီး dezpuezdlaz ၁၂ နာရီအခြားအချိန်ဖြစ်သော်လည်း zabia qe zolo သည် cazoz ezpecialez အတွက်မဟုတ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်နောက်ဆုံးဆက်ဆံရေးကိုမနေ့ကဖြစ်ခဲ့သည့်အတွက်မနေ့ကဖြစ်ခဲ့ခြင်းမရှိ ze zi ezto ငါ့ကိုမကောင်းဘူး ???
ငါနှင့်ဆက်ဆံရေးရှိသလားသို့မဟုတ်အခြားဆေးလုံးကိုသင်အကြံပြုသည့်အခါတိုင်းငါ Paztilla တားဆေးအဖြစ်ယူကြောင်းကောင်းလှ၏ ... ???
ကောင်းပြီ၊ ကျွန်ုပ်ဇနီး ၂၄ ရက်တွင်အကာအကွယ်မရှိဘဲလိင်ဆက်ဆံခဲ့ပြီးနောက်ဇွန်လ ၂၇ ရက်နေ့တွင်ဆေးလုံးကိုသောက်လိုက်သည်။ ကျွန်ုပ်တစ် ဦး တည်းသာသောက်ခဲ့သည်။ သို့သော်ကျွန်တော်ပြောခဲ့သည့်အချက် ၂ တွင်အကျိုးသက်ရောက်မည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်။ ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်ရမည်ကိုမသိပါ ကြောက်တယ်၊ ငါ့ကိုပေးတဲ့တစ်ခုတည်းသောလက္ခဏာကငါဘာလုပ်ရမလဲပင်ပန်းနွမ်းနယ်နေတယ်၊ ​​ခေါင်းကိုက်တယ်
ဟယ်လို!! မင်းငါ့ကိုကူညီနိုင်မယ်ဆိုရင်မိန်းကလေးတွေကိုငါသိချင်တယ်။ နေ့စဉ်သောက်ဆေးတွေကို Diane ၃၅ လို့ခေါ်တယ်။ ဒါကြောင့်အားလုံးပြီးသွားတိုင်း ၃ ရက်သောက်ရတယ်၊ အသစ်မစရဘူး။ ကျွန်ုပ်၏ရည်းစားနှင့်ဆက်ဆံရေးရှိခဲ့သည့်နောက်ဆုံးဆေးလုံးကိုနောက်ဆုံးသောက်သောနေ့တွင်မည်သို့ဖြစ်မည်နည်း။ ငါ glanique အရေးပေါ်ဆေးလုံးကိုသောက်ပြီးနောက်သက်ဆိုင်ရာ ၃ ရက်အတွင်းအခွင့်အလမ်းပေးလျှင်ငါသံသယဖြစ်ဖွယ်ရာ။ မိန်းကလေးများသည်ကျွန်ုပ်အားအဘယ်ကြောင့်ပြေစေနိုင်သနည်း။
စနေနေ့နဲ့တနင်္ဂနွေနေ့တွေမှာကျွန်မရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အတွင်းမှာသုတ်သင်ရှင်းလင်းခံရပြီးတနင်္လာနေ့ညမှာအရေးပေါ်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုတွေအားလုံးကို glanique ယူပြီးငါရှိသလားဆိုတာသိချင်ပါတယ်။ သူတို့မှာသူတို့မှာအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသလား၊ မသောက်ဘူးလားဆိုတာတွေလား
မင်္ဂလာပါ၊ ကြည့်ပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်အချိန်ကာလကိုရရှိပြီ ဖြစ်၍ ကြာသပတေးနေ့ ၅ ရက်မြောက်နေ့နှင့်သောကြာနေ့ ၆ ရက်နေ့တွင်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နှင့်အတူပထမဆုံးအကြိမ်အတူတကွရှိနေခြင်းကိုမိမိကိုယ်ကိုဂရုစိုက်ရန်မေ့ခဲ့သည်။ ဒီတစ်ခါတော့ငါတို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဂရုစိုက်မိပေမဲ့နံရံပေါ်ကပြိုကွဲသွားတာကံဆိုးတာပဲ၊ ငါဒီနေ့ငါသန္ဓေတားဆေးကိုစတင်ရတော့မယ်၊ ကိုယ်ဝန်ရနိုင်မလား။
ကျွန်ုပ်သည်အကာအကွယ်မဲ့လိင်ဆက်ဆံမှုကိုဒီဇင်ဘာ ၁၇ ရက်တွင်ပထမဆုံးအကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်၏အချိန်ကာလမှာ ၁၁ လမှ ၁၅ လအထိဖြစ်သည်။ လိင်ဆက်ဆံပြီးနောက်တစ်နေ့ဆေးသောက်ပါ။ ကောင်လေးကငါ့အပေါ်ကိုသုတ်ရည်မထုတ်ဘူး၊
နောက် ၇ ရက်အကြာမှာကျွန်တော်အနည်းငယ်အညိုရင့်ရောင်သွေးထွက်လာသည်။
မင်္ဂလာပါကောင်းသောနံနက်ခင်းမေးခွန်း - အကယ်၍ ကျွန်ုပ်၏ရည်းစားသည်ကျွန်ုပ်အတွင်းသို့ ၀ င်ရောက်လာသည်ဆိုပါက x ဥပမာ၊ ၁၅ ရက်နောက်တစ်နေ့တွင်ဆေးလုံးအပြီးမနက်ကိုယူနိုင်သည်။ ၎င်းသည်ဆက်လက်အလုပ်လုပ်နေ ဦး မည်သို့မဟုတ်သူရှိသည့်သုတ်ရည်လွှတ်မှုတိုင်းအတွက်ကျွန်ုပ်သောက်ရမည်။ ဆေးလုံး။
မင်္ဂလာပါမိန်းကလေးများ၊ ငါဆေးသောက်လိုက်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါသောက်ခဲ့တယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါကကိုယ်ဝန်စမ်းသပ်မှုလုပ်ခဲ့ပြီးအပျက်သဘောဖြစ်သည်။ 28/1/2016 တွင်ငါကြည့်ရှုခဲ့ပြီးပြီ။ မတ်လ ၃ ရက်နေ့တွင်ငါ့ထံသို့မလာခဲ့ပါ။ ထိုနေ့နှင့်နံနက်စောစောကျွန်ုပ်အနေဖြင့်ခေါင်းမူး။ အူအူရောင်ရောဂါဖြစ်ပွားပြီးမည်သူမျှကျွန်ုပ်ထံမလာသေးပါ။ မည်သူမဆိုကျွန်ုပ်ကိုကူညီနိုင်ပါစေသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်သည်အခြားကိုယ် ၀ န်စမ်းသပ်မှုပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်တွင်ထည့်သွင်းထားသည့်လွန်ခဲ့သော ၁ နှစ်ကလွန်ခဲ့သောတစ်လက၎င်းကိုဖယ်ရှားလိုက်ပါ။ လွန်ခဲ့သော 1 ရက်ကကျွန်ုပ်သည်အကာအကွယ်မရှိသောလိင်ဆက်ဆံမှုပြုခဲ့ပြီးနောက်တစ်နေ့နံနက်တွင်ဆေးသောက်ပြီးနောက်တွင်ကျွန်ုပ်၏မေးခွန်းသည်ကျွန်ုပ်သည် winstrol သံသရာလည်နေပြီး primibolan sterols သည်ထိရောက်မှုကိုသက်ရောက်သည်။ ငါအလျင်အမြန်သိရန်လိုအပ်သည်ဆေးလုံးကနေအနည်းငယ်, ငါအရမ်းစိုးရိမ်နေကြသည်, ငါ6နှစ်5လများအတွက်ကာလရှိခဲ့ဘူး
Hoola ။ ငါဆေးကိုအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပြီးနောက်တစ်နေ့တွင်သောက်လျှင်ဟုတ်လား။
Yoo မနေ့ကငါလိင်ဆက်ဆံပြီး ၁၇ ရက်မှာငါအဆုံးသတ်ပြီး ၂၄ ရက်နေ့မှာကိုယ်ဝန်ရနိုင်မလား။
မင်္ဂလာပါ၊ ခင်ဗျားကိုကူညီနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်၊ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့လ ၁၅ ရက်နေ့မှာကျွန်တော့်ဆီရောက်လာပြီး၊ (၅ ရက်) ၁၅ ရက် (ကျွန်တော်ကိုယ်ဝန်ရနိုင်တဲ့နေရာ) မှာကျွန်တော်စွန့်ခွာပြီးကျွန်မလိင်ဆက်ဆံခဲ့ပြီးအတွင်းပိုင်းကိုအဆုံးသတ်ခဲ့ပါတယ်။ နောက်တစ်နေ့ဆေးသောက်ပြီးနောက်တစ်နေ့သောက်လိုက်တာကကျွန်မကိုယ်ဝန်ရှိနေလို့ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဒီနေ့ ၁၄ ရက်မှာဘာမှမလာဘူး။
မာရီယာဟိုဆေး Roldan ဟုသူကပြောသည်
ဟိုင်းလော်ရာ၊ ဆေးသောက်ပြီးနောက်နံနက်ခင်းကိုသင်ယူလျှင်သင်ကိုယ်ဝန်ရှိနေသည်မှာမဖြစ်နိုင်ပါ၊ သို့သော်မဖြစ်နိုင်ပါ။ မင်္ဂလာပါ။
မာရီယာဟိုဆေး Roldan မှတုံ့ပြန်ပါ
ရိုစီယို Belen ဖာနန်ဒက်ဇ ဟုသူကပြောသည်
မတ်လ ၂၃ ရက်နေ့မှာငါလိင်ဆက်ဆံခဲ့ပြီးကွန်ဒုံးလည်းကွဲသွားတယ်။ အဲဒီနေ့မှာပဲငါဆေးသောက်လိုက်တယ်။ ၂၈ ရက်နေ့မှာငါပေါ်လာတဲ့ရာသီလာပြီ။ ကြာသပတေးနေ့ ၃၁ ရက်ကြာသပတေးနေ့မှာထွက်သွားတယ်။ အခုဒီနေ့23ပြီ ၁၅ ရက်မှာငါလိင်ဆက်ဆံနေပြီ၊ ငါဆေးသောက်လိုက်တယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကထပ်ခါထပ်ခါကွဲသွားတယ်၊ ဘာဖြစ်သွားလဲငါကိုယ်ဝန်ရနိုင်မလာနိုင်ဘူးလား။ ကျေးဇူးပြုပြီးအကူအညီလိုပါတယ်
Rocio Belen Fernandez အားပြန်ကြားပါ
ငါရာသီလာခြင်းကိုအဆုံးသတ်သည့် ၂၂ ကြိမ်မြောက်တွင်ကိုယ် ၀ န်ရနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်လိင်ဆက်ဆံခဲ့သည့် ၂၃ ကြိမ်မြောက်တွင်သူရောက်ရှိခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်သည်အလွန်မမှန်မကန်ဖြစ်ခဲ့သည်။
မင်္ဂလာပါ Amber ဟုတ်တယ်၊ မင်္ဂလာပါ။
Sara karina ဟုသူကပြောသည်
ကူညီကြပါ!! Aprilပြီလ ၁၅ ရက်မှာငါနဲ့ဆက်ဆံရေးရှိခဲ့ပြီးအရေးပေါ်ဆေးကိုယူခဲ့တယ်။ သူကငါအတွင်းထဲမ ၀ င်ဘူးဆိုတာငါရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောခဲ့တယ်။ ၉ ရက်အကြာမှာငါစမ်းသပ်မှုလုပ်ခဲ့တယ်။ အပြုသဘောထွက်လာတယ်။ ပဲစေ့ကိုတွေ့နိုင်တယ် ဆေးလုံးမလွယ်ဘူးလား။ ဒါမှမဟုတ်သူမကိုယ်ဝန်ရှိနေပြီလား။
Sara karina အားပြန်ကြားပါ
မင်္ဂလာပါ Sara အကယ်၍ သူသည်သင့်အတွင်း၌သုတ်ထုတ်ခြင်းကိုမပြုခဲ့ပါကသင်သည်ကိုယ်ဝန်ရှိနေပြီးဖြစ်သည်။ မင်္ဂလာပါ။
အရေးတကြီး .. ငါလိင်ဆက်ဆံခဲ့ပြီးနာရီဝက်အကြာမှာငါ levonorgestrel ဆေးကိုသောက်တယ်၊ ငါမေလ ၆ ရက်နေ့မှာလိင်ဆက်ဆံခဲ့ရတယ်၊ ငါရာသီလာပြီAprilပြီလ ၂၁ ရက်နေ့မှာရောက်လာတယ်၊ ငါမမှန်ဘူး။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
မင်္ဂလာပါ၊ မေးခွန်းတစ်ခု၊ စနေနေ့ညမှာကျွန်မရည်းစားနဲ့လိင်ဆက်ဆံခဲ့တယ်။ တနင်္လာနေ့ည ၈:၃၀ နာရီမှာငါဆေးသောက်လိုက်တယ်၊ ဒါပေမယ့်မနက် ၂ နာရီ ၀ န်းကျင်လောက်မှာငါအော့အန်ခြင်းစတင်ခဲ့ပြီးဆေးရုံကိုသွားပြီးသွေးရည်ကြည်ထဲရောက်နေတယ်။ နံနက် ၅ နာရီအထိ၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရန်ဖြစ်နိုင်သည်၊
မင်္ဂလာပါ Natali၊ ခင်ဗျားအော့အန်သည်အထိနာရီပေါင်းများစွာကြာတယ်၊ ဒါကြောင့်သင်ဆေးလုံးကိုမအန်ထုတ်ဘူးလို့ငါထင်တယ်။ ထိုနည်းတူစွာ၊ အကယ်၍ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းကနိမ့်ကျသည်ကိုသင်မြင်လျှင်စစ်ဆေးပါ။ လေးစားပါတယ်
E'sparza jaquelinn ဟုသူကပြောသည်
မေလ ၁၀ ရက်၊ မေလ ၁၁ ရက်တွင်ကျွန်ုပ်၏ရည်းစားနှင့်ပထမဆုံးအကြိမ်လိင်ဆက်ဆံနိုင်ခြင်းကမေလ ၁၀ ရက်တွင်အိပ်ဆေး ၂ လုံးပါ ၀ င်သည့်အိပ်ချိန် ၀.၇၅ ဆေးသောက်ခဲ့သော်လည်းကျွန်ုပ်ကိုယ်ဝန်ရနိုင်သည့်ဆေးပြားကိုကျွန်ုပ်သောက်ခဲ့သည်။ ညနေ ၆း၀၀ နာရီမှာသူတို့ကကျွန်တော့်ကိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမပေးတဲ့အတွက်အရမ်းစိတ်လှုပ်ရှားမိပါတယ်
E'sparza jaquelinn အားစာပြန်ပါ
Ana မာရီယာ ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်မှာမေးခွန်းတစ်ခုရှိသည်။ ကျွန်ုပ်သည်အရက်မသောက်ဘဲနေခဲ့သည့်နေ့မတိုင်မီတစ်ရက်အလိုတွင်ကျွန်ုပ်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နှင့်ဆက်ဆံရေးရှိခဲ့သည်။ နှစ်ရက်အကြာတွင်ကျွန်ုပ်သည်မမှန်မကန်ဖြစ်ခြင်းမှထွက်မလာသေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဒီတစ်ခါတော့ငါ (ဆေးပြားတစ်လုံးတည်း) ကိုသောက်ပြီးတစ်ပတ်အကြာမှထွက်သွားလျှင်၊ ၎င်းသည်အမြဲတမ်းဤကဲ့သို့သောနေ့ရက်များကိုကြာမြင့်ခဲ့သော်လည်းနောက်ဆုံးအဆုံးသတ်တော့မည့်နောက်ဆုံးနေ့တွင်ကျွန်ုပ်သည်တဖန်ပြန်လည်ဆင်းသွားခဲ့သည်။ ငါအူမကြီးမှီတိုင်အောင်၊ ပထမနေ့၌ပုံမှန်ဖြစ်သည်။ ဆေးလုံး၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကြောင့်ဤသို့ဖြစ်ပျက်ပါသလား။
ana maria သို့ပြန်သွားရန်
ဟဲလို၊ ငါလိင်ဆက်ဆံပြီး ၂၈ နာရီအကြာမှာ၊ ဆေးသောက်လိုက်တယ်၊ ကွန်ဒုံးကျိုးသွားတယ်။ ငါ့အခွင့်အလမ်းကဘာလဲ။ ဒါဟာ ovulating ပြီးနောက်နှစ်ရက်ဖြစ်ခဲ့သည်။
မင်းရဲ့အုပ်ချုပ်မှုကိုလျှော့ချလိုက်ရင်မင်းမှာအခွင့်အရေးမရှိတော့ဘူး။ ၄ င်း၏ထိရောက်မှုသည်လိင်ဆက်ဆံပြီးနောက် ၇၂ နာရီအတွင်းဖြစ်သော်လည်း ၂၄ နာရီမှနာရီများကြာသည်နှင့်အမျှ၎င်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုမှာလျော့နည်းသွားသည်။ မင်္ဂလာပါ။
ငါပထမ ဦး ဆုံးလတစ်လယူလျှင်ဆေးလုံး၏မည်သည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုသိရှိလိုပြီးနောက်ဆက်တွဲအနေဖြင့် ORECAUTION နှင့်စပ်လျဉ်း။ ငါဆန့်ကျင်ခဲ့ပြီးပြီ၊ ကျွန်ုပ်သည်မည်သည့်အရာကိုငါယူနိုင်ခဲ့သနည်း၊
ဟယ်လိုငါရည်းစားနဲ့လိင်ဆက်ဆံခဲ့တယ်။ ငါကွန်ဒုံးသုံးတယ်။ ဒါပေမယ့်သူကနည်းနည်းလေးပိုတယ်၊ သောကြာနေ့ ၁၀း၃၀ မွန်းတည့်အချိန်၌ကျွန်ုပ်သည်လိင်ဆက်ဆံခဲ့သည်။ နောက် ၁၁ ရက်စနေနေ့မှာနေ့လည် ၂ ခါနီးပါးသောက်ပြီး ၁.၅ ဆေးကိုသောက်လိုက်တယ်။ သူတို့အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိမရှိသိချင်ရင်လားဒါမှမဟုတ်ဆက်ဆံရေးရဲ့တစ်နေ့တည်းမှာသောက်သင့်လား။
Hello Belén, နာရီများကုန်လွန်သွားသည်နှင့်အမျှထိရောက်မှုနည်းသော်လည်းပထမ ၄၈/၇၂ နာရီအတွင်းတွင်အကျိုးသက်ရောက်သည်။ မင်္ဂလာပါ။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်ကွန်ဒုံးမရှိဘဲလိင်ဆက်ဆံခဲ့သည်၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ်မေလ ၂၆ ရက်၊ နောက်တစ်နေ့တွင်ဆေးလုံးကိုကျွန်ုပ်အသုံးပြုခဲ့သည်၊ ကျွန်ုပ်၏ရာသီလာခြင်းမေလ ၁၄ ရက်နေ့တွင်ရောက်ရှိပါသည်။ ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့သည်ဇွန် ၁၆ ရက်တွင်ရောက်ရှိနေပြီး၊ ရာသီလာခြင်းမလာခြင်း၊ ကိုယ် ၀ န်ဆောင်မှုကိုစစ်ဆေးခြင်းနှင့်၎င်းသည်အပြုသဘောထွက်လာသည်၊ နံနက်ယံ၌ကျွန်ုပ်သည်ပထမဆုံးအကြိမ်ပြုစုကုသမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးသူတို့သည်ကိုယ်ဝန်ရှိကြောင်းသံသယရှိမရှိဘာမှမလေ့လာခဲ့ကြသော်လည်းကျွန်ုပ်သည်ကိုယ် ၀ န်ဆောင်မှုကိုစစ်ဆေးခဲ့ပြီးအပြုသဘောပြန်ပေါ်လာသည်။ ဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာသိတယ်၊ ငါတကယ်ကိုယ်ဝန်ရှိနေရင်သိရမယ်။ ကျွန်ုပ်သည်အကူအညီလိုအပ်သည်၊ ကျွန်ုပ်သည်ဆုံးဖြတ်ချက်များချမှတ်ရန်လိုအပ်သည်။ ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်ကိုကူညီပါ။
မင်္ဂလာပါ Ivonne, ဆေးတွေပြီးနောက်နံနက်အမြဲထိရောက်သောမရှိကြပေ။ အကယ်၍ သင်သည်နှစ်ကြိမ်စစ်ဆေးမှုကိုခံယူပါကသင်၌ကိုယ်ဝန်ရှိနေနိုင်သည်။ ရက်အနည်းငယ်စောင့်။ သေချာအောင်အခြားအိမ်စာစစ်ဆေးပါ။ မင်္ဂလာပါ။
မင်္ဂလာပါ၊ မေးခွန်း၊ ကျွန်ုပ်သည်မနေ့က၊ ဇွန် ၂၀ ရက်၊ နာရီ ၃ နာရီခွဲအကြာတွင်ဆေးသောက်ပြီးနောက်နံနက်ပိုင်းတွင်ကျွန်ုပ်လိင်ဆက်ဆံလျှင်မည်သို့ဖြစ်မည်နည်းကျွန်ုပ်သံသယဖြစ်လျှင်အခြားတစ်ခုခုယူလိုသည်။ အခုကိုယ်ဝန်ဆောင်ချင်တယ်။ ငါ့ရဲ့သံသယဖြစ်နိုင်တယ်၊ ဖြစ်နိုင်ရင်ဘယ်လိုအကျိုးဆက်တွေရနိုင်မလဲ၊ ပိုဆိုးမယ်ဆိုရင်ဆိုးရွားလှတဲ့အရာတွေကိုဖြေဆိုပါ။
Tammy garcia ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်အကာအကွယ်မဲ့လိင်ဆက်ဆံမှုကိုတစ်လလျှင် ၃ ကြိမ်၊ ဆေးသောက်ပြီးနောက်တစ်နေ့တွင်သုံးကြိမ်နှင့်ကျွန်ုပ်သည်အချိန်မတိုင်သေးပါ။
ဘယ်ငါကိုယ် ၀ န်ကိုစမ်းသပ်တယ်၊
Tammy Garcia သို့စာပြန်ပါ
ကျွန်ုပ်၏စိုးရိမ်ပူပန်မှုမှာဟိုဆေးဖြစ်သည်၊ ကျွန်ုပ်၏ခင်ပွန်းသည်ကျွန်ုပ်အတွင်း၌အဆုံးသတ်သွားလျှင်ဖြစ်သည်။ သောကြာနေ့သည်ည ၁၁း၁ တွင်ဖြစ်သည်။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်၏နောက်ဆုံးကာလသည်ဇွန် ၇ ရက်မှ ၁၁ ရက်အထိဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ရည်းစားနှင့်လိင်ဆက်ဆံခဲ့ပြီး ၂၈ ရက်တွင် ၂၉ ရက်နေ့တွင်မွန်းလွဲ ၃ နာရီခန့်တွင်ဆေးလုံးကိုသောက်ခဲ့သည်။ ညအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နှင့်ထပ်မံလိင်ဆက်ဆံခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းတွင်ကျွန်ုပ်သည်လိင်ဆက်ဆံခဲ့သည်။ ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နှင့်စနေနေ့တွင်နောက်တစ်နေ့ဆေးထပ်သောက်ပါကကျွန်ုပ်ကိုယ်ဝန်ရနိုင်ပါသလား။ ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ၃ ကြိမ်တခါမှမသုတ်သင်နိုင်ခဲ့ပေမယ့်အရေးပေါ်ဆေးတွေကိုသောက်ရမယ်လို့ခံစားခဲ့ရတယ်။ ကျေးဇူးပြုပြီးကျွန်တော့်မေးခွန်းကိုဖြေဆိုပါက ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်တော်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ခန္တာကိုယ်နှင့်ဗိုက်နာခြင်းတို့ဖြင့်သုံးရက်ကြာသောက်ခဲ့သည့်သူငယ်ချင်းအတွက်ငါ့ကိုခွင့်လွှတ်ပါ။ ပုံမှန်လား၊ ဆရာ ၀ န်နှင့်တိုင်ပင်သင့်ပါသလား။
Leslie perugachi ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ။ ကျေးဇူးပြုပြီးဒီကိုကူညီပါ ..
ဇွန် ၂၅ ရက်တွင်လိင်ဆက်ဆံပြီးနောက်ဆေးကိုသောက်ခဲ့သည်။ ဇူလိုင် ၉ ရက်တွင်ကျွန်ုပ်သည်ကွန်ဒုံးနှင့်လိင်ဆက်ဆံပြီးဆေးလုံးကိုမသောက်ခဲ့ပါ။
Leslie Perugachi ကိုပြန်ပြောပါ
နာရီ ၃၀ အကြာမှာဒီဆေးကိုသောက်ပါ၊ ငါဟာမြေသြဇာကောင်းတဲ့နေ့တွေမှာပါ၊ ကျွန်မကိုယ်ဝန်ရနိုင်မလား။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်၏ရည်းစားနှင့်ဆက်ဆံရေးရှိခဲ့သည်။ သူသည်ကျွန်ုပ်၏လိင်အင်္ဂါအတွင်းနှစ်ဆတိုးတက်လာခဲ့သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည် ၁ ကိုသာယူခဲ့ပြီး၊
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကာကွယ်မှုကင်းမဲ့စွာလိင်ဆက်ဆံခဲ့ပြီး ၂၂ ရက်စနေနေ့တွင်ကျွန်ုပ်၏ရည်းစားသည်အပြင်သို့ထွက်လာသည်။ တစ်နာရီအကြာတွင်ကျွန်ုပ်ဆေးသောက်နေသေးသည်၊ ၃ ရက်ကျော်လွန်ပြီးကျွန်ုပ်သွေးထွက်ခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ ငါသွေးထွက်နေရတယ်ဒါပေမယ့်ငါအခုထိသွေးမရှိဘူး။ သွေးထွက်သင့်သလားဆိုတာမသေချာဘူး။ ကူညီပါ
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်အကာအကွယ်မဲ့သောဆက်ဆံရေးရှိခဲ့သော်လည်းကျွန်ုပ်၏ရည်းစားသည်အပြင်သို့ထွက်လာသည်။ ကျွန်ုပ်သည်စနေနေ့တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည့်ဆေးလုံးကိုဆက်လက်သောက်သုံးခဲ့ပြီးအင်္ဂါနေ့ဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်သည်သွေးထွက်ခြင်းမရှိပါ၊ ကျွန်ုပ်ကိုယ်ခန္ဓာနာကျင်မှုခံစားခဲ့ရပြီး (၎င်းသည်ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်သည်။ ဆေးသောက်ပြီးသူငယ်ချင်းများသူတို့ပြောတာကငါသွေးထွက်သင့်တယ်၊
မင်္ဂလာပါ၊ လွန်ခဲ့သော ၂ ပတ်ကကျွန်ုပ်အင်္ဂါဇာတ်သံကိုတင်ခဲ့ပြီး၊ ကျွန်ုပ်သည်လိင်ဆက်ဆံခဲ့ရသည်။ နှစ်ပတ်အကြာတွင်လက်စွပ်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိမည်ကိုမသေချာပါ။ ဆေးသောက်ပြီးနောက်နံနက်တွင်ငါသောက်ခဲ့သည်။ လက်စွပ်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဆုံးရှုံးသလား။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်မေးခွန်းတစ်ခုမေးချင်ပါသည်၊ ကျွန်ုပ်သည် ၄ ​​ရက်နှောင့်နှေးခဲ့ပြီးစတုတ္ထမြောက်နေ့တွင်ဆေးမသောက်သေးပါ။ Sara, ဘယ်လောက်ကြာကြာလာဖို့ယူထားတာလဲ
ဟီလာရီစံပယ် Condor yataco ဟုသူကပြောသည်
hillary jazmin condor yataco အားပြန်ကြားပါ
မင်္ဂလာပါ။ ငါဒီဆေးအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပြီးပြီးပါပြီ။ ယခုနှစ်ဇွန်လတွင်ငါဆေးသောက်ခဲ့သည် .. ယခုနိုဝင်ဘာ 20, 2016 ငါနောက်တဖန်ယူပါလိမ့်မယ် ... ငါ့မေးခွန်းသင်ခန္ဓာကိုယ်အလွန်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါသလဲ6လထပ်ခွင့်မပြုဘဲတစ်နှစ်လျှင် ၂ ကြိမ်အကြံပြုသော်လည်းဤတစ်ကြိမ်သည်ကျွန်ုပ်ကိုများစွာအကျိုးသက်ရောက်မည်လားဆိုသည်ကိုသိလိုပါသည်။ ...
ပထမနေ့က ၁.၅ glanique ကိုယူပြီး ၂၄ နာရီအတွင်းမှာငါလိင်ဆက်ဆံခဲ့တယ်။ သူတို့ကသူတို့ညွှန်ပြတဲ့ ၇၂ နာရီအတွက်ငါ့ကိုကာကွယ်ပေးလိမ့်မယ်
ဟယ်လို! ကျွန်ုပ်၏မေးခွန်းမှာဤဆေးသည်ကလေးများရှိပြီးဖြစ်သောအမျိုးသမီးကိုအလားတူသက်ရောက်မှုရှိသလား။ ကောင်းပြီ၊ ကလေးရှိရင်သားအိမ်ဟာထပ်တူထပ်မျှတော့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။
raybee jaramillo ဟုသူကပြောသည်
raybee jaramillo အားပြန်ကြားပါ
မင်္ဂလာပါ၊ တောင်းပန်ပါတယ်။ Aprilပြီ ၁၄ ရက်ည ၁၀ နာရီမှာအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုရှိခဲ့ပါတယ်။ နောက်နေ့ည ၈ နာရီမှာတက်ဘလက်တွေကိုယူပေမယ့်နှစ်မျိုးလုံးယူပါ။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်ကိုယ်ဝန်မရနိုင်သောကြောင့်စိတ်ပူမိပါသည်။ နောက်နှစ်ဖေဖော်ဝါရီနှင့်မတ်လနောက်နှစ်၊ နှစ်လအကြာဆေးလုံးကိုယူပါ။ ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်ရမည်နည်း။
မင်္ဂလာပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်အားကူညီချင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည်သံသယများစွာရှိပြီးတစ်ချိန်တည်းမှာပင်ကျွန်ုပ်စိုးရိမ်မိပါသည်။ မတ်လ ၃၁ ရက်နေ့တွင်ကျွန်ုပ်၏ရည်းစားနှင့်အကာအကွယ်မရှိဘဲလိင်ဆက်ဆံခဲ့ပြီးAprilပြီလနောက်တစ်နေ့တွင်ကြိုတင်ကာကွယ်မှုအဖြစ်ဆေးကိုသောက်ခဲ့သည်။ ၁ နှင့် ၁၅ နှစ်ခန့်တွင်ကျွန်ုပ်သောက်လိုက်သောအခါ၊ ငါရာသီလာသောအခါမေလ ၁ ရက်တွင်ထပ်မံလိင်ဆက်ဆံခဲ့ပြီးနောက်တစ်နေ့တွင်မေ ၂ ရက်တွင်ဆေးလုံးကိုသောက်ခဲ့သည်။ ယခုအချိန်အထိငါ၌ရာသီလာခြင်းလက္ခဏာများမတွေ့ရပါ။
ငါနောက်တစ်နေ့ဆေးထပ်သောက်နိုင်မလားသင့်ရဲ့အကူအညီကိုသိစေချင်တယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၈ ရက်ကငါဆေးသောက်ခဲ့တယ်။ ဒီကနေ့ကွန်ဒုံးကအိမ်ထဲမှာရှိနေဆဲ၊ ငါဘာလုပ်ရမလဲ ??????
Holw, လွန်ခဲ့သောတစ်လကဆေးလုံးအပြီးမနက် ၂ ရက်အတန်ကြာအစာစားပြီးနောက်သူတို့နှင့်အတူတူပင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့ဖူးသူများသို့မဟုတ်တစ်စုံတစ်ရာဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်ကိုသိလိုသည်။ ကျွန်ုပ်သူတို့ကိုအီးမေးလ်မှချန်ထားရန်သူတို့ကကျွန်ုပ်ထံစာရေးနိုင်ခဲ့သည် solange.ivonne@hotmail.com
ကမ္ဘာ ဦး G ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာနေ့လည်ခင်းလေးမှာငါ့ကောင်မလေးနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့လ ၇ ရက်နေ့မှာသူနဲ့ပြတ်သွားတယ်၊ နောက်တစ်နေ့ငါဆေးလုံးကိုသောက်လိုက်တယ်။ အဲဒီလမှာပဲငါရောက်နေတယ် ၁၉ ဒါပေမယ့်ဒီလမှာငါနဲ့အကာအကွယ်ရခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့်နေ့စွဲဖြစ်ပြီးငါမရောက်ရသေးပါကဆေးလုံး၏အကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်လိမ့်မည် ???
ကမ္ဘာ ဦး G ကိုတုံ့ပြန်ပါ
မင်္ဂလာပါ။ လိင်ဆက်ဆံပြီးနောက်တစ်နေ့တွင်ကျွန်ုပ်ဆေးသောက်ခဲ့သော်လည်းကျွန်ုပ် ၅ မိနစ်ခန့်သာရှိသောကြောင့်သုက်ရည်မသောက်ခဲ့ပါ။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏ရာသီလာခြင်းအပေါ်မည်သို့အကျိုးသက်ရောက်သည်ကိုသိလိုပါသလား။
ဒီနှစ်ရဲ့နှစ်၊ ဇန်နဝါရီ ၅ ရက်တနင်္ဂနွေနေ့၊ ကျွန်ုပ်၏မိတ်ဖက်နဲ့မိတ်သဟာယဖွဲ့ခြင်းဟာနှစ်ပေါင်း ၂ နာရီမှာရှိခဲ့တာပါ။ သူရဲ့စည်းမျဉ်းကဒီဇန်နဝါရီလ ၉ ရက်ကို REGULATE ဆိုတာကိုပြောပြပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော့်မေးခွန်းကသူနည်းနည်းငါ့အားပြောပြလိမ့်မယ်။ သောနေ့, ငါဇန်နဝါရီလ5ရက်, ငါသူ့ကိုအချိန်ဇယားကိုဆေးပေးပြီ။